ခရီးသည်၏ လွင့်မျောခြင်း: December 2008
Hi ,,, 2009 !
¸„ø¤º ``°º¤ø„¸ ¤ø„¸¨°º¤ø„¸
★　& ‧°∴°﹒☆°．﹒ ‘*.　Happy New Year * ‘★WISHIN U & UR FAMILY A PROSPEROUS 2009 ... HAVE A WONDERFUL NEW YEAR AHEAD..
ချစ်ခင်ရသော မိတ်ဆွေများ “ နှစ်သစ်တွင် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ... ”
သူငယ်ချင်းတယောက် ပို့ပေးထားသည့် နှစ်သစ်ကူး လက်ဆောင် ဖြစ်သည်။ ထိုမှတဆင့် မိတ်ဆွေများကို ပြန်လှည် ဝေမျှခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
Posted by လူလ at Wednesday, December 31, 20085comments:
တနေ့သော ခရစ္စမတ်ပိတ်ရက်ရှည်အတွင်း ကျွန်ုပ်မောင်လူလသည် ခရီးထွက်ရန် အကြောင်းမဖန်လာသဖြင့် စိတ်ထဲ ညှီစိစိနှင့် စားခြင်း အိပ်ခြင်းအမှုမျှသာပြုပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် အမှိုက်ပုံက ကောက်ယူထားသည့် ဂျာမဏီလုပ် MEDION အမျိုးအစား ကွန်ပြူတာ အစုတ်လေးဖြင့် ဘလောဂ်လည်ပတ်ခြင်းသမှုကိုပဲ ပြုနေရတဲ့ဘ၀၊ ဆောင်းလေကြမ်းက အသိတရား လွတ်ကင်းနေသော အမူးသမားတယောက်လို ရှစ်ခွင့်တိုင် အရပ်တကာကို ကလူကမြူပြုသဖြင့် အေးချမ်းသည့်ဒဏ် မခံနိုင်၊ အမြဲတမ်းလည်း အပြင်သို့ မထွက်ချင်၊ ကျန်းမာရေးအရ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ဈေးထွက်ခြင်းပါပဲ။ သည်လိုနှင့် အကာလအချိန်တချိန်တွင် မောင်မင်းကြီးသားတယောက်က ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေးဖွဲ့ထားသည်ကို ဖတ်ရှု့လိုက်ရပါ၏။ ဖတ်ရှု့ပြီးသကာလ ကျွန်တော်မျိုးမောင်လူလသည် မောင်မင်းကြီးကို ဂျီတော့မှာ သွားချက်လေတော့သည်။ *( ချက်ထားသည်ကို စာလုံးအမဲဖြင့် ပြထားသည်)
ချက်တင်နှောပြီး သကာလ ဤစာကို ရေးသင့် မရေးသင့်ဆိုပြီး အတန်တန် စဉ်းစားရတယ်၊ ရေးလာသူကလဲ သက်ကြီးဝါကြီးဆိုတော့လည်း စော်ကားရာ ရောက်မလားပေါ့။ ဒါဗေမဲ့ဗျ တော်လှန်တဲ့အတွေး ရှိတဲ့သူဆိုတော့လဲ ဟုတ်သည် မမှန်သည် ပြန်ရှင်းရမှာပေါ့။ **( မောင်မင်းကြီး တင်ထားသည့် သူ့၏ ဘလောဂ်မှ စာစုများကို စာလုံး အစောင်းဖြင့် ပြထားသည်)
တကယ်ကို စဉ်းစားတယ်ဗျ။ ကြီးသူရိုသေ ငယ်သူလေးစား ဆိုသလို ဂါရ၀တရားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီးတော့ ရေးသင့်သလား မရေးသင့်ဘူးလားဟု ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်ခဲ့၏။ နောက်ဆုံးတော့ လူဆိုတာ ကောင်းစိတ်နှင့် မကောင်းစိတ်က အစဉ်တွဲရှိနေသမို့ အကောင်းဘယ်လောက် တွေးတွေး၊ မောဟသဘောအရ အဆိုးဖက်ပဲ မဲအများဆုံးပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တာပဲလေ။ အခုလို ပြန်လှည်ရေးချင်းသည်လည်း ကျွန်တော်မျိုးကြီးက အစပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။ တဖက်သားက အစပြုခြင်းဖြင့် တုန့်ပြန်မှုတခုသာ ဖြစ်၏။ ( ဤကား စကားချပ်)
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်လောက်က ရာဟူး(Yahoo Messenger)မှာ စိအက်ဖ် ( CF )ဆိုတဲ့ ကွန်ဖရင်း ( Conference )တွေ အလွန်တရာ စည်ကားလှပါသည်။ အရှေ့အနောက် မြန်မာတွေ ခင်ရာ မင်ရာ စိအက်လုပ် အတင်းချ၊ ၀ါဒပြိုင်၊ ဟာသတွေပြော၊ ဆရာကြီးတွေလုပ် ရောင်တော်တွေပြန်၊ တယောက်နဲ့တယောက် မခံချင်အောင် စရင်းဖြင့် ၂၄နာရီ မပြတ် စိအက်ဖ်က ရှိပါ၏။ ရန်ပွဲလည်း နေ့တိုင်းလိုလို ရှိတယ်။ မြစ်ကမ်းနဘေးက ငါးဈေးလိုပါ့ဗျ၊ သေခြာတာကတော့ အေးဆေးဆေးဆေး နားထောင်ပြီး သူများကိုလည်း ပြသာနာမရှာရင် စိအက်ဆိုတာက မပျင်းဘူးဗျ။
တခု ထူးထူးခြားခြား ကြုံဖူးလိုက်တာက ကြူခြင်းဆိုတဲ့ ပြသာနာပါ။ ကောင်လေးတွေနဲ့ ကောင်မလေးတွေ ချစ်တင်နှီးနှောဖလှယ်၍ ကြူပြီးသကာလ အချစ်ရည်ပြယ်သောအခါဝယ် စိအက်ဖ်ထဲလာပြီး ဘယ်ကောင်မလေးက ဘယ်လိုပြတယ်။ဘယ်အကောင်က အကျင့်က ဘယ်လိုဆိုပြီး အတင်းအဖျင်းတွေ အပြန်အလှန် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖေါ်တာပဲ။ အများတော့မဟုတ်ပါ တယောက်စ နှစ်ယောက်စ ဤကိစ္စများ ကြားဖူး၏။ ကျွန်တော်မျိုးက နားထောင်သမားဆိုတော့ သူများပြောတာတွေကို နားထောင်ရတဲ့ဘ၀ပါ။ နားထောင်ရင်းနဲ့ သြော် လူတွေ တမျိုးကြီးပါလားပေါ့။ အထူးသဖြင့် တချို့ လူတွေက နှမချင်းမစာနာတတ်ပဲ သွားပုပ်လေလွင့်တွေ လူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင် ဖွတတ်တယ်။ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မိန်းကလေးတယောက်ကို ဒီလိုမပြောသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ တဆက်တည်းပဲ တွေးမိလိုက်တာက အတွင်းစကား အပြင်စကား ဆိုတဲ့ဟာကို သွားသတိရမိလိုက်လို့ပါ။
မိတ္တဗလတွေ၊ မိတ္တသစ္စာတွေတော့ မသိဘူးဗျ၊ ကိုယ်တွေ့အရတော့ ပြောနိုင်သည်။ “ အတွင်းစကားဆိုတာ တယောက်နှင့်တယောက် ယုံကြည်မှုတခုအရ ပြောဆိုလိုက်တာကို ထင်ပါ၏။ အပြင်စကားဆိုတာကတော့ တစ်ယောက်စကား တယောက်နားမှာ မခါးရအောင်ဆိုပြီး စကားလုံးများကို သကာလူးပြီး လူ့ယဉ်ကျေးမှုအရ ပြောဆိုတာ ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်။” ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ ပြောသင့် မပြောသင့်ဆိုတာက လူစည်း ဘီးလူးစည်းခြားပြီး သိတတ်မြင်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါ၏။ ဒါကိုပြောနေတာလဲ လက်ညောင်းရုံပဲ ထင်တယ်။ ဆရာကြီးတဆူကို ပြောနေရတော့လည်း ဘုန်းကြီးတစ္ဆေကို အရဟံဂုဏ်တော်ပွားပြီး သွား ခြောက်နေသလို ဖြစ်နေတယ်။ တတ်မနိုင်ပါဘု ပြောမှသိ ထိမှနာတဲ့အစားမျိုးပုံစံက ရှိတယ်ဆိုတော့ လက်ညောင်းခံပြီး ရေးနေရတဲ့ဘ၀ပါ။ (ဤကား စကားတရပ်)
* မောင်လူလ: သြော် အခုမှ ဖတ်မိတယ်
မောင်လူလ: နာမည်အရင်း ရေးလိုက်ပေါ့ဗျ
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်မျိုး ပြောချင်တာကတော့ လုပ်ပြီးမှတော့ အဆုံးအောင် လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးခေါင်း ခေါက်ပြီးမှ ၀န္ဒာမိ လုပ်တဲ့ ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ ဒါလဲ မရေးရဲပြန်၊ ၀ါးလုံးခေါင်းထဲ သာတဲ လ ဖြစ်နေပြီ။
* မောင်လူလ: သြော်၊ တ တစ် စားလဲ ကြက်သွန်ဖြူပါပဲ
ဦးဘိုးတော်: တစ်တက်စားလည်း ကြက်သွန်။
မောင်လူလ: ဒါက private ပရိုက်ဗိတ်လေ။ စာအုပ်ဖတ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်တာ
တဖက်လူ နားလည်ရင် ပီးတာပဲ
ဒါကိုပဲ ကြည့်ပါတော့ ပရိုက်ဗိတ် private ချက်မှာ လူအချင်းချင်း စာရိုက်တာ အများအားဖြင့် ပြီးစလွယ်ရိုက်တာများတယ်လေ။ အားလုံးလည်း ကြုံဖူးမှာပါ။
သူ့နှင့် စာရိုက်လျှင် မြန်မာစာသတ်ပုံကျမ်းကို နဘေးမှာ ချပြီး စာရိုက်ရမလိုလို ဖြစ်နေပြီ မှားပ။
ဖြစ်ပုံက အပေါ်ကိုပဲ ကြည့်ပါတော့ အရပ်ကတို့ရေ..
ပြောနေတဲ့အကြောင်းက တခု၊ သူပြောလာတာက စာလုံးပေါင်း၊
ဒါဆို မောင်မင်းကြီး၏ စိတ်တော်နေ သဘောထားကို ခန့်မှန်းလို့ရနေပြီ။
ဘယ်အကြောင်းအရာဖြစ်ဖြစ် ပြောဆိုဆွေးနွေးနေရာဝယ် ဘာမဟုတ်တဲ့ စာလုံးပေါင်းအမှားကို လာပြောနေလျှင် လိုရင်းပြောနေတာက ပျောက်သွားတယ်လေ။ အခုလဲ ကြည့်ပါ ကျွန်တော်မျိုး ရေးလိုက်တာ တ တစ်စားလဲ ကြက်သွန် လို့ ရိုက်လိုက်တာ စာလုံး လာပြင်နေပြန်ပြီ။ နေပါဦး ဒီလောက်ပြင်ချင်သပဆိုရင် ကျွန်တော်မျိုး ပုံနှိပ်တိုက်ဖွင့်မှပဲ စာစီစာရိုက် အလုပ်ခန့်ပေးမယ်။
“ကဒဲက” ဆိုတာကလည်း အပေါ်က ဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲဗျ။ တနေ့သ၌ ကြုံခဲ့တယ် ဆိုပါတော့၊ ပြောနေတာက တတိယ အင်္ဂလိပ် မြန်မာစစ်ပွဲမှာ အင်္ဂလိပ်တွေက ကုန်းဘောင်မင်းသားတယောက်ဆိုပြီး အရပ်သား ဦးဘသန်းကို သင်္ဘောပေါ်တင်လာတဲ့ အကြောင်းအရာတခုကနေ မြင်းကွန်း မြင်းခုံတိုင်မင်းသားရောက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်မျိုးက သိသလောက် မြင်ကွန်းမင်းသားက ကနောင်ကို လုပ်ကြံပြီးတော့ ထိုင်းကို ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ပြောတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ မောင်မင်းကြီသားကပဲ ဗီယက်နမ်မှာ နေတယ်လို့ ပြောလာတယ်လေ။ ဆရာရွှေဥဒေါင်းရဲ့ လက်ထက်တော်ကြီးစာအုပ်မှာ “ ကျွန်ုပ်ဖို့ကား နေရကျလှပါ၏။ သို့သော် အရှင်နှစ်ပါးတို့၏ နိုင်ငံရေး အခြေအနေမူကား မဟန်လှချေ၊ ၀ဇီယာဘုရင်သည် ကိုယ်တော်ကြီး၏ ကိစ္စကို ရီးတီးယားတားလုပ်၍ အချိန်ဆွဲထားရာ၊ နောက်ဆုံးတွင် စိတ်မြန်သော ကိုယ်တော်ကြီးသည် ယိုးဒယားပြည်မှ စွန်ခွာ၍ ပြင်သစ်ပိုင် အင်ဒိုချိုင်းနားနယ်ဖက်သို့ ကူးသွားတော်မူလေသည်။” လို့ အဆုံးသတ် နိဂုံးအပိုင်းမှာ ရေးထားတာကို ဖတ်ဖူးသဖြင့် ကျွန်တော်မျိုးကြီး မငြင်းခဲ့ပါဘူး။ ဤကာလတွင် http://en.wikipedia.org/wiki/French_Indochina ပြင်သစ်ပိုင် အင်ဒိုချိုင်းနားဆိုသည်မှာ လော ကမ်ပူးချား ဗီယက်နမ်ဟု ဖတ်မှတ်ဖူး၏။ မြင်ကွန်းမင်းသားကြီးက ဘယ်မှာ သေသွားသလဲဆိုတာ အခုအထိ ကျွန်တော်မျိုးကြီး မဖတ်ဖူးသေးသဖြင့်၊ မြင်းကွန်းမင်းသား ထွက်သွားသည်ကား ဗီယက်နမ်တော့ မဟုတ်တန်ရာဟု အထင်ရှိကြောင်း ပြန်လှည်ဆွေးနွေးနေစဉ်၊ လာပြီး ထောက်နေတာက မြန်မာစာ သတ်ပုံ၊ ဆိုတော့လဲ အမြင်ကပ်ကပ်နဲ့ ပြန်ပြောလိုက်ပါသည်။ ပြောတာလဲ စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ စကာပြေသုံး စကားပြောသုံးလို့ ခွဲခြားရနိုင်တယ် ထင်ပါ၏။
မြန်မာစကားက တခါတလေ ပုံသေမရဘူးဗျ။ ဗြိတိသျှကို တော်လှန်တဲ့ခေတ်မှ သခင်တွေလဲ စာလုံးအသုံးအနှုံးတွေဖြင့် ကွဲလွဲကြတာပဲ။ မယုံရင် ကာနယ်ချစ်ကောင်း စာအုပ်မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။ “ ဒို့ ” သုံးမလား “ တို့ ” သုံမလားဆိုပြီး အချေအတင် ဖြစ်ခဲ့တာတွေပေါ့။ နောက်ပြီး မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် လက်ထက်မှာ “ တ ” နှင့် “ တစ်” ပြသာနာကို ဦးနေ၀င်းအာဏာဖြင့် သင်ရိုးတခုလုံးကို ပြင်လိုက်တယ်လေ ကျွန်တော်မျိုးကြီးကလဲ အခုအထိ “ တ” လို့ ယောင်နေတုန်း၊ နောက် “ အမ၊ အကို” နှင့် “ အစ်မ၊ အစ်ကို”၊ ပြီးနောက် “ဖြည်းဖြည်း နှင့် ဖြေးဖြေး” စ တာတွေပါ၊ ဆိုလိုတာကလည်း မရှင်းနိုင်သေးတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်မျိုး (၈)တန်း ပညာသင်နှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြ ဆရာက since ကို ကဒဲက သင်ပြခဲ့ပါတယ်။ (၉)တန်း ပညာသင်နှစ် အစမှာ သင်ရိုးသစ်တွင် ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံခွဲတော့ “ ကတည်းက” ဖြစ်လာခဲ့သည်ကို ကောင်းကောင်း မှတ်မိပါ၏။ ဤသို့မှတ်မိရခြင်း အကြောင်းကား ကျွန်တော်မျိုးကြီး နေထိုင်သော မြို့သို့ ကဒဲကျေးရွာမှ မိန်းကလေးတယောက် အထက်တန်းပညာကို လာရောက်ဆည်းပူးပါသည်။ ကျွန်တော်မျိုးကြီးနှင့် အတန်းတူသဖြင့် သူမအား မsince ဟု နာမည်ပြောင်းခေါ်ပြီး နောက်ပြောင်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။
တခန်းရပ်တော့မယ်၊ ပြောမဲ့အကြောင်း ပျောက်သွား၏။
ပြောတဲ့သူကလည်း မောင်မင်းကြီးသား၏ အရင် တန်းပလိတ်အဟောင်းမှာ သတင်းဝစ်ဆိုက်တွေကို ညွှန်းထားတာ ရှိတယ်ဗျ၊ မှတ်မိတဲ့သူတွေ သိနိုင်မည် ဖြစ်၏။ ခေတ်ပြိုင် ဧရာဝတီ မဇ္ဈိမ ဆိုပြီး၊ ဒါဗေမဲ့ သူရေးထားတာက မဈွိမတဲ့ ..
မောင့်မင်းကြီးသားရဲ့ လွဲချက်က အရပ်တကာ ကြော်ငြာပြီးမှ လွဲတာ၊ ဆရာကြီးဆိုတာ ဒါမျိုးခေါ်သလားတော့မသိ၊ သည်လိုဖြင့် မဇျွီမကို “ ဇ ” နှင့်ပေါင်းသလား၊ “ စ ” ဖြင့်လားလို့ သွားမေးပြန်တော့ ဟိုလို ဒီလို လုပ်လိုက်ပြန်၊ ကျွန်တော်မျိုး သိသလောက် မဇ္ဈီမက “ ဇ ” ဖြင့်သာ မြင်ဖူးပါ၏။ အင်းလေ ဟိုလို ဒီလိုတွေများတော့လဲ အနာဂါတ် မြန်မာပြည်ကြီးက ရင်လေးစရာ။
* ဦးဘိုးတော်: ဟုတ်ကဲ့
ဦးဘိုးတော်: ရေးတာမရေးတာ ကျနော့်အလုပ်ပါခင်ဗျာ
လူလ: ဒါတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ရေးပြီးမှတော့
ဒါလဲ ဆိတ်လဂွေ့သဏ္ဍာန် ဟိုဖက်ရမ်း ဒီဖက်ရမ်း လုပ်နေတာ ကြည့်ပေတော့ အရပ်ကတို့ရေ..
* ဦးဘိုးတော်: စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ဗျာ
အခင်အမင်လည်း မပျက်ပါနဲ့ 
မောင်လူလ: မဆိုးပါဘူး။ အမှန်ကို မြင်စေချင်တဲ့သဘောပါ။ နာမည်အရင်းကို ရေးစေချင်ပါ၏
** “ကျွန်ုပ်။ ။ ကျုပ်တို့ စကားရပ်လိုက် ကြရင် ကောင်းမယ်မောင် ရယ်။ ကျုပ် ငြင်းတာ ခုံတာတွေကို စိတ်ကုန်လွန်းလို့ ပါ။ ဆက်လည်း မပြောပါရစေနဲ့ တော့ ။ နိုင်တာ ရှုံးတာတွေ ကျုပ်မကြုံချင်တော့လို့ ပါမောင်။”
အကြောင်းအရာတခုကို လူကြီးတယောက်ဆိုပြီး သူလည်း သိနိုင်မှာပဲ သွားဆွေးနွေးဖို့ ပြောလိုက်တိုင်းကို ငြင်းတာ ခုံတာအဖြစ် မြင်တတ်တဲ့ မောင်မင်းကြီးနှင့် ကျွန်တော်မျိုးတို့ တခုခု လွဲနေသလိုပဲ။
ကျွန်တော်မျိုး အမြင်ပြောရရင် လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်ကို သူ နားမလည်ဘူး ထင်တယ်။ ဥပမာဆိုပါစို့ဗျ ဆွေးနွေးချက်တခုကို တဖက်သူက အချက်အလက်ကျကျ ထောက်ပြလာရင် လက်ခံရမှာပဲ။ အစုအဝေးဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမှန်ကို ရှာခြင်းနှင့် တယောက်နှင့်တယောက် ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမှန်ကို ရှာခြင်းဆိုတဲ့ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခွင့်ဆိုတာကို နားမလည်သော သူတယောက်ပဲ လို့ ကောက်ချက်ချရမယ်လေ။
အင်း ဒါလဲ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး မြန်မာပြည်အတွင်း ကြီးလာတယ်ဆိုတော့ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခေတ်မှာ လူ ဖြစ်၊ န၀တခေတ်မှာ သူ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လဲ။ နအဖခေတ်မှာတော့ လူ သူ မကျ ဖြစ်လာတာပေါ့။
** “စကားနည်း ရန်စဲကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသော်လည်း လူရွယ်မှာ ကဒဲက တည်းဟူသော စကားလုံးကို မြန်မာစာပေလောကတွင် အတင်း အဓမ္မ သွတ်သွင်းရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေလေရာ .. ကျွန်ုပ်ဖက်မှ ၎င်းအား မြန်မာစာတတ်မတတ် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း၊"ကဒဲက " မှတဆင့် "ကဓဲက " "ကဌဲက" "ကဋဲက"စသည်တို့အပြင် "ခင်ဗျာ" အစား "ခင်ဘြာ"စသည်တို့ ပါ နောက်ဆက်တွဲပေါ်လာနိုင်သည်ကို ပူပင်မိလေ သောကြောင့် မြန်မာစာကို ဆက်လက် လေ့လာစေလိုကြောင်း အစ ရှိသည်ဖြင့် နှုတ်လွန် ကျွံမိလေရာ ငြင်းခုံပွဲတို့ထုံးစံအတိုင်း အရုပ်ဆိုး လှစွာဖြင့် နိဂုံးချုပ်ခဲ့ ရပေ တော့ သည်။”
မေးလိုက်ချင်တယ်။ သိက္ခာ မကျစေချင်ရင် ဘာလို့လူသိရှင်ကြား စာတကြောင်း ပေတထုပ်လုပ်ပြီး ရေးစရာလား။ ပြောကတမျိုး လုပ်တော့တခြား၊ ကိုယ်တိုင်ကရော မြန်မာစာ သတ်ပုံကို ဘယ်လောက် ပိုင်နိုင်တာလဲ၊ မဇ္ဈိမကိုတောင် အမှန် မရေးနိုင်တာကိုများ လာပြောနေသေးပါရဲ့..
ပရီဗိတ် private ချက်မှာ ပြောတာကို မြန်မာစာပေလောကလို့ အတင်းအဓမ္မဆိုပြီး လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ ပြောတတ်လိုက်ပ၊ မှားပါတယ်။
* မောင်လူလ: ဒါမှလဲ တဖက်လူက ဖြေရှင်းချက်တွေ ထွက်ရတာ ကောင်းတယ်လေ
အခုက ဟိုလို ဒီလိုနဲ့ စာဖတ်သူတွေ အုန်းစားမှာစိုးလို့ပါ
ဦးဘိုးတော်: ကိုလူလက ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် ကိုယ်ပိုင်ဘလော့မှာ ရဲဇော်ဆိုတာ ကျနော်ပါဆိုပြီး ရေးလည်း ရတာပဲဗျာ
မောင်လူလ: အင်း ကျွန်နော်က ဒါကိစ္စတွေနဲ့ သိပ်မတွေးတတ်ဘူး အထူးသဖြင့် အွန်လိုင်းမှာပေါ့
ဒါဗေမဲ့ ရဲဇော်က ကျွန်နော်ပါဆိုပြီး ရေးရင် ကျွန်နော်ကပဲ အလုပ်မရှိ ကြောင်ရေးချိုး ဖြစ်နေတာလေ
ဦးဘိုးတော်: မေ့လိုက်ပါတော့ ဆရာရယ်
မောင်လူလ: ပြောပြီးပြီလေ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ သိပ်မထားတတ်ပါဘူးလို့။ ဒါဗေမဲ့ ပြန်လှည် ဖြေရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ ဥာဏ်က ရှိတယ်ဆိုတော့လဲ။ ပြောနေရတာပါ၊ ဒီလောက်တော့ သဘောထားကြီးနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာကတော့ မှန်ပါတယ်။ လူနာမည်က လွဲနေတယ်ဆိုတော့လဲ
ကိုယ်ပြုခဲ့သော လူ့စည်းကမ်း၊ မိတ်ဆွေကျင့်ဝတ်ကို ကိုယ်ကပဲ စပြီး ဖေါက်ဖျက် အမှားပြုတာကို မ၀န်ခံပြန်၊
ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည်က “ မှားတဲ့ဟာကို မှားတယ်လို့ ၀န်ခံရဲတဲ့ သတ္တိရှိရမယ် ” လို့ ပြောခဲ့တာပေါ့။
** “အချိန်ကာလကို နှစ်၊လ၊ရက်၊ နေ့ စွဲ ၊ အတိအကျ မမှတ်မိလင့်ကစား ကျွန်ုပ်မှာ မှတ်ဥာဏ် ကောင်းသူ စာရင်းတွင် ပါဝင်သူဖြစ်သည့် အလျောက် လွန်ခဲ့ သော ရက်ပေါင်း သုံးဆယ် ဝန်းကျင် ဖြစ်သည်ကိုမူ ကောင်းစွာမှတ်မိလျက်ရှိပေသည်။”
ဒါလေးကို မှတ်စရာဖြစ်နေတာပေါ့။ ပြောပြလိုက်မယ် အုန်းစားခံပြီး မမှတ်ပါနဲ့။ ဂျီမေးကို ၀င်လိုက်ရင် chat ကို ကလစ်လိုက်ပါ။ အကုန်ရှိတယ်။ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်နေ့က ဘယ်ဝါ လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ ရှိတယ်ဗျ။
** “ထိုနေ့ နေ့ လည် နှစ်နာရီခန့် က ကျွန်ုပ်နှင့် ဥရောပတိုက်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား၊ တော်လှန်ရေး ရဲဘော်ဟောင်း၊ ရဲဇော် ဆိုသူ လူရွယ် တဦးနှင့် ကွန်ပြူတာ ကြေးမုံပြင်တွင် မြန်မာစာ အရေးအသားနှင့် ပါတ်သက်၍ အမှတ်မထင်၊ အချေအတင် အချီအချ ငြင်းခုံ မိကြသော အကြောင်း အရာကား အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်လေ၏။”
အင်း.. ကျွန်တော်မျိုးကိုတော့ ဒီမို ဘက်တော်သားတဲ့။ မေးတဲ့လူရော ဘာ ဘယ် ဘက်တော်သားပါလိမ့်၊
တခုတော့ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ လွင့်မျောခြင်းကို ကြည့်ပါ။ အုပ်ချုပ်ခံ ပြည်သူတယောက်အနေဖြင့် မှားနေတာကို ထောက်ရှု့ ရေးနေပါ၏။ ကွန်မြူနစ် မှားလဲ ကွန်မြူနစ်ကို ရေးမယ်။ ဆိုရှယ်လစ်မှားလဲ ဆိုရှယ်လစ်ကို ရေးမယ်၊ ဒီမိုကရေစီလို့ အော်နေတဲ့ သူတွေလဲ သူတို့မှားရင် ရေးရမှာပဲ၊ နောက်ဆုံး ကိုယ်မှားခဲ့လည်း ၀န်ခံရေးမှာပဲ။ မှားနေတာသိလို့ တော်လှန်တယ်။ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခြင်းကို မြတ်နိုးတယ်ဗျ။ ဘယ်အကြောင်းအရာအဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံး အမှန်တခုရောက်အောင် ဆွေးနွေးချင်၏။ ဒါဗေမဲ့ ဆွေးနွေးတာကို ငါသိတယ် ငါတတ်တယ် ဒေါသနဲ့ လာဟောက်တာကတမျိုး၊ private ချက်တင်မှာ စာလုံးပေါင်းမှားတာကို ထောက်တာကတဖုံ အကြောင်းအရာ အမှန်ကို ဘယ်တော့ ရောက်မှာလဲ၊ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါမျိုးက ခေတ်ကုန်သွားပါပြီ ငါက လူကြီး ငါပြောတာပဲ မှန်တယ်၊ ငါပြောတာ နားထောင် ပုံစံတွေလေ။ ဒါကိုများ နအဖအဖွဲ့ကို အပြစ်လို့ ရေးနေသေးတယ်။ ငါလဲ ဒီအစားထဲမှာပါဆိုပြီး ငြိမ်နေပါလား။ အတ္တများနေရင် မြို့တွင်းလမ်း တောလမ်းတွေမှာပဲ ပတ် မောင်းပါ။ ဟိုင်းဝေးမှာ တက်လာ မမောင်းပါနဲ့ ..ယာဉ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြစ်တတ်တယ်လေ။
အချုပ်ကို ဖွင့်ရရင် မောင်သာရ စကားလိုပေါ့ “ရေးတတ်ရင် ၀တ္တု ဖြစ်တယ်” တဲ့။ အထူးသဖြင့် အခုလို အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ မြန်မာစာ ရိုက်တတ်ရင်၊ ကိုယ်ပိုင် ဘလောဂ်ကို လုပ်တတ်ဖို နေသာသာ ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့စာကို ဘလောဂ်မျက်နှာပြင်မှာ မြင်အောင် လုပ်တတ်ရင်နှင့် ကွန်ပြူတာတလုံး ရှိရင်ပေါ့ စာတပုဒ်
ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုံစံကို ရေးတာဟာလည်း ရေးတတ်ပါတယ်လို့ ပြတဲ့သဘောပါပဲ။ ထူးထူးခြားခြား ဘာမှ မရှိပါကြောင်း..
* လူလ: တခုတော့ရှိတယ်လေ။ အတွင်းစကား အပြင်စကားဆိုတာပေါ့
ကျွန်နော်ကတော့ အိုးပင်းမိုင်းပဲဗျ။ ကျွန်နော်စိတ်ထဲမှာရှိရင် ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ဗြောင်ရေးတယ်။ ကျွန်နော်ကိုလဲ ဗြောင်ရေးစေချင်တယ်
အွန်လိုင်းကို စိတ်ထဲမှာ ထားလိုက်ရင် ရှုးသွားမှာပေါ့
ဤကား.. အတွင်းအပြင်ဆိုသော သဘောတရားကို နားမလည်သော၊
ထိုအရာကား.. မိမိ အစပျိုး မမိခဲ့သော ပြန်တမ်း၊
သို့ဖြစ်၍ကား.. “ပါးပါးလေးပါပဲ ဦးဘိုးတော်ရယ်” ဟု တွေးတောနေမိပါလေသတည်း။ ။
မှတ်ချက်။ ။ မောင်မင်းကြီးက ကျွန်တော်မျိုးအား ရဲဇော်လို့ အမည်ထွင်သောကြောင့်၊ တဖန်ပြန်လည်ပြီး မောင်မင်းကြီးနာမည်ကို ဦးဘိုးတော် ဟု အမည်ထွင် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ဘလောဂ်လည်ပတ်ကြကုန်သော ဝေနေယျများ သိကြကုန်လော့...
ဓါတ်ပုံကို Yahoo Images မှ ရှာယူပြီး အသုံးပြုထားပါသည်။
Posted by လူလ at Tuesday, December 30, 2008 1 comment:
Merry Christmas andaHappy New Year ကို နိုင်ငံတကာ လူမျိုးတို့၏ အသုံးအနှုံးများ
“ ယနေ့ ကမ္ဘာအနှံအပြားတွင် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့် လူအများ အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်စီးလတ္တံ ” ဟူ၍ ကာတွန်းကို စိတ်ကူးခဲ့သည်။
မြန်မာလူမျိုး = (ကျေးဇူးတင်ပါသည်)၂..မိတ်ဆွေတို့.. ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်၊ ဘုရားသခင်ရဲ့  မေတ္တာတော် ဤအိမ်သို့ ရောက်စေသောဝ်...
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ...
အင်္ဂလိပ်လူမျိုး = Merry Christmas andaHappy New Year
ဒီန်းမတ်လူမျိုး = Glædelig jul og godt nytår, God jul!
နော်ဝေလူမျိုး = God jul og godt nytt år
= God jul og godt nyttår
= Gledelig jul
ဆွီဒင်လူမျိုး = God jul och (ett) gott nytt år
= Bra fortsättning God fortsættelse
အိုက်စလန်လူမျိုး = Gledileg jól og farsælt komandi ár Glædelig jul og ? kommende år
= Gladur jól Glad jul
ဖာရိုးကျွန်းနေ လူမျိုး = Gledilig jól og eydnurikt nyggjár Glædelig jul og ? Nytår
ဖင်လန်လူမျိုး = Hyvää joulua ja iloista uutta vuotta
= Hauskaa joulua. 0nnellista uutta vuotta
အစ်စတိုနီးယားလူမျိုး = Häid jõulupühi ja head uut aastat
( Estonia ) = Rõõmsaid Jõuluphüi ja Uut Aastat
= Rõõmsaid Jõulupühi ja Head uut aastat
= Ruumsaid Joulup|hi
= Roomsaid Joulu Puhi
လစ်ဗီးယားလူမျိုး = Jovi talshpivdi un Vondzist uto aigasto
ဆာမီးလူမျိုး = Buorrit Juovllat Buorit
(Sami) Juovllat ja Buorre Oddajahki
၎င်းလူမျိုးများသည် ကမ္ဘာ့မြောက်ဖက်အစွန်းကျသော နော်ဝေး ဆွီဒင် ဖင်လန် မြောက်ဖက်ဒေသ နှင့် ရှရှား အနောက်မြောက်ဖက်ဒေသများတွင် ပျံနှံနေထိုင်ကြသည်။
အက်စကီးမိုးလူမျိုး = Juullimi pilluarit
(Greenland) Juullimi ukiortaassamilu pilluarit
ဂျာမဏီလူမျိုး = Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
ဘာဗာရီးယားလူမျိုး = Frohe Weihnocht undaguats neichs Joa
( Bavaria (German: Freistaat Bayern (help·info), with an area of 70,553 km² (27,241 square miles) and almost 12.5 million inhabitants, isaregion located in the southeast of Germany and is the largest state (Bundesland) of Germany by area. Its capital is Munich in Upper Bavaria. About 6.4 million of its population are Bavarian, 4.1 million Franconian and 1.8 million Swabian.)
ဂျူးလူမျိုး = Gute Vaynakhtn unaGut Nay Yor
Elsass လူမျိုး = E gueti Wïnâchte & E glecklichs Nej Johr
၎င်းလူမျိုးသည် ပြင်သစ် အရှေ့ပိုင်းဒေသတွင် နေထိုင်ပါသည်။
ချက်လူမျိုး = (Prejeme Vam) Veselé Vánoceastastny Novy Rok
ဆားဗီးယားလူမျိုး = Vesele Vianoceastastlivy Novy Rok ,
စူရီနာမီလူမျိုး = Wan switi kresneti nanga wan bun nyun yari
(Republic of Suriname ) Wan swieti krisneti nanga wan boen njoen jari
၎င်းလူမျိုးတို့သည် တောင်အမေရိကတိုက် မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတခု၍ ထိုဒေသတွင် နေထိုင်သည်။ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ တောင်ဖက်တွင် တည်ရှိသည်။
Pennsylvania လူမျိုး = En frehlicher Grischtdaag un en hallich Nei Yaahr
၎င်းလူမျိုးများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပြည်နယ်တခုအတွင်း နေထိုင်ကြသည်။ မာရီလင်းပြည်နယ်၊ အနောက် ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် အနီးတွင် ရှိသည်။
အရှေ့ဖက် Frisian လူမျိုး = Hillige Kristdag un Gluksäls Näijier
အနောက်ဖက် Frisian လူမျိုး = Nofilke Krystdagen en in lokkich Nijjier
( The Frisian languages areaclosely related group of Germanic languages, spoken by about 500,000 members of Frisian ethnic groups, who live on the southern fringes of the North Sea in Denmark, the Netherlands and Germany.)..
ဟော်လန်လူမျိုး = Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
တောင်ပိုင်း အာဖရိကန်လူမျိုးများ = Geseënde Kersfees en 'n voorspoedsige nuwe jaar
( Afrikaans is an Indo-European language, derived from 17th century Dutch and thus classified as Low Franconian West Germanic. It is mainly spoken in South Africa and Namibia, with smaller numbers of speakers living in Botswana, Angola, Swaziland, Zimbabwe, Lesotho, Zambia and Argentina.)
Tok Pisin = Meri Krismas & Hepi Nu Yia
၎င်းလူမျိုးသည် ပါပူဝါးနယူဂီနီနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သည်။ သြစတြေလျတိုက် မြောက်ဖက်တွင် တည်ရှိသည်။
Aeka = Keremisi jai be
Notu/Ewage = Keremisi dave be
Korafe = Keremisi ewewa
Orokaiva = Keremisi javotoho
Zia = Kerisimasi wosewa
Suena = Kerisimasi kokopai
Bislama လူမျိုး = (Mi wisim yufala eerywan) one gutfala Krismas
Republic of Vanuatu နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သည်။ သြစတြေလျတိုက် အရှေ့မြောက်ဖက် ကီလိုမီတာ ၁၇၅၀ အကွာတွင် တည်ရှိပြီး တောင်ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာအတွင်း တည်ရှိသည်။
Krio လူမျိုး = Appi Krismes en Appi Niu Yaa
ထိုလူမျိုးတို့သည် အနောက် အာဖရိကရှိ Republic of Sierra Leone နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ပါသည်။
ပါရှန်းလူမျိုး = Cristmas-e-shoma mobarak bashad
Dari ဘာသာ ( အရှေ့ပါရှန်း) = Christmas-e Shoma Mobarak
Pashto ဘာသာ = Christmas Aao Ne-way Kaal Mo Mobarak Sha
၎င်းဘာသာသည် အရှေ့ အီရန်၊ အာဖဂန်နှင့် အနောက်မြောက် ပါကစ္စတန်ဒေသများတွင် အသုံးပြုသည်။
Kashmiri ကက်ရှီမီးယား = Christmas Id Mubarak
ပန်ချာဘီ = Nave sal di mubaraka
အူရဒူ = Christmas Mubarak ho
ဟိန္ဒူ = Shubh Christmas
သြရိဿ = Sukhamaya christmass ebang khusibhara naba barsa
တမီးလ် = Nathar Puthu Varuda Valthukkal
ဟူစ်(Hausa) = Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar Shekara
ထိုဘာသာစကားသည် ကင်မရွမ်း၊ ဂါနာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ဆူဒန်နှင့် တွန်ဂိုနိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုသည်။
Kawalib ဘာသာ = Amirnar Krismas Gi
(Kawalib (Koalib) isaNiger_Congo language spoken primarily in Uganda and Northern Sudan)
Peul = Jabbama be salla Kirismati
အနောက်အာဖရိကဒေသ နိုင်ငံများတွင် ထိုဘာသာစကားကို အသုံးပြုသည်။
Zulu ဇူးလူးလူမျိုး = Sinifisela ukhisimusi omuhle no nyaka omusha
ဂျပန်လူမျိုး = Kurisumasu omedeto. Shinnen omedeto
ထိုင်းလူမျိုး = Suksan Wan Christmas lae Sawadee Pee Mai
Sooksun Wan Christmas
နာဂလူမျိုး = U kenei Christmas mu teicie kes a-u sie teicie kesa-u sie niepete keluo shuzaie we
= Anu keghi Christmas nu amapi kethighi wa salam pi nthu chupenle
မဏိပူရ၊ ကသည်းလူမျိုး = Krismas Hlomum & Kumthar Lawmum
ဟာဝိုင်ယီလူမျိုး = Mele Kalikimaka me ka Hauloi Makahiki hou
မိုရီလူမျိုး (Maori) = Meri Kirihimete
ထိုလူမျိုးသည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွင်း မူရင်းဌာနေ တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်သည်။
ဆာမိုလူမျိုး (Samoa) = La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း ကျွန်းများတွင် နေထိုင်သည်။
တွန်ဂါ (Tonga) = Kilisimasi Fiefia & Ta'u fo'ou monu ia
ထိုလူမျိုးသည်လည်း ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း ကျွန်းနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သည်။
ရှရှားလူမျိုး = (Pozdravlyayu) s prazdnikom Rozhdestva Khrista
= (Pozdrevlyayu) s prazdnikom Rozhdestva Khristosa
i s Novym Godom
ယူကရိန်းလူမျိုး = Veselykh Svyat i scaslivoho Novoho Roku
ဘူလဂီးယားလူမျိုးနှင့် = Tchestito Rojdestvo Hristovo. Tchestita Nova Godina
ဟန်ဂေးရီးယားလူမျိုး = Kellemeskarácsonyi ünnepeket és boldog új évet
ဂရိလူမျိုး = Kali christugenna kai kale chronia polka,
Kali cristugenna kai kalecronia polk,.
Kala Khristtougena kai Eftikhes to Neon Ethos,
Kala Christougenna kai evtichismenos o kainourios chronos,,
Kala Christougenna Kieftihismenos O Kenourios Chronos,
အယ်ဘီးနီးယားလူမျိုး (Republic of Albania) = Gëzuar Krishlindjet VitineRi
= Gezur Krislinjden
= PÎr shum vjet Krishtlindje
အစ်ပါရန်တိုဘာသာစကား = Felican Kristnaskon kaj Bonan Novjaron Felic'an,
Kristnaskon kaj Bonan Novjaron Felicxan
. Kristnaskon kaj Bonan Novjaron Felichan , Kristnaskon kaj Bonan Novjaron ,
( Esperanto has had continuous usage byacommunity estimated at between 100,000 and2million speakers for overacentury, and approximately one thousand native speakers. However, no country has adopted the language officially. Today, Esperanto is employed in world travel, correspondence, cultural exchange, conventions, literature, language instruction, television,and radio broadcasting.)
အိုင်းရစ်လူမျိုး = Beannachtaí na Nollag agus Sonas na hAthbhliana,
Nolag Mhaith Dhuit Agus Bliain Nua Fe Mhaise ,
Isle of Man = Ollick Ghennal Erriu as Blien Feer Vie,
Nollick ghennal as blein vie noa,
ဗြိတိသျှကျွန်းစုများ၏ အလယ်တွင် တည်ရှိသည်။
ပြင်သစ်လူမျိုး = Joyeux Noël et Bonne Année,
အာရဂွန်လူမျိုး (Aragon) = Nabidà & Goyosa Añada benign
စပိန်နိုင်ငံ၏ အရှေ့မြောက်ဒေသတွင် နေထိုင်သည်။
စပိန်လူမျိုး = Feliz Navidad y un bueno año nuevo
အာဂျင်တီးနား = Feliz Navidad Y Un Próspero Año Nuevo
လက်တင်ဘာသာ = Natale hilare et Annum Faustum
အီတလီ = Buon nataleeprospero nuovo anno,
Buon NataleeFelice Anno Novo ,
Buon Natalie hilareefelice Capo d'Anno,
စစ္စလီကျွန်းသား = Bon NatalieProsperu Annu Novu
ကိုရ်စီကန် = Bon NataleeBon capu d'anno
(Corsican (Corsu or Lingua Corsa) isaRomance language spoken and written on the islands of Corsica (France) and northern Sardinia (Italy), alongside French and Italian, which are the official languages. Corsu is the traditional native language of the Corsican people, and was long the sole language of the island, which was acquired by France in 1768. In 1990, more than two centuries later, nearly all Corsicans were fluent in French, usually asafirst language.)
ဖရီးယ်လီလူမျိုး (Friuli) = Bon NadâleBon An Gnûf
(Friuli is an area of northeastern Italy.)
လဒီးလူမျိုး (Ladin) = Bon Nadel y Bon Ann Nuef
( Ladin (Ladino in Italian, Ladin in Ladin, Ladinisch in German) isaRhaeto-Romance language spoken in the Dolomite mountains in Italy between the regions of Trentino-Alto Adige/Südtirol and Veneto. )
သြစတေးလျ (ဥရောပ) = Bon Nadau
ပေါ်တူဂီလူမျိုး = Feliz Natalepróspero Ano Novo
အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုး = Selemat Natal. Selamah Tahun Baru,
Selamat Hari Natal & Selamat Tahun Baru,
( Indonesia (Bahasa Indonesia') is the official national language of Indonesia. It is based onaversion of Malay from the Riau islands in western Indonesia.)
တူရကီလူမျိုး = Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun
ရိုမေးနီးယားလူမျိုး = Sarbatori Fericite La Multi Ani ,
Sãrbãtori fericite si An Nou fericit
စလိုဗီးနီးယားလူမျိုး = Vesel Bozic in uspesno novo leto
ဆားဗီးယားလူမျိုး = Srikne boikne svetke i srikno novo ljeto
Srecan Bozic i Nova Godina
ပိုးလူမျိုး(ပိုလန်လူမျိုး) = Wesolych Swiat Bozego Narodzenia
i szczesliwego Nowego Roku
ဘီလာယုစ်လူမျိုး (Belarus) = Winshuyu sa Svyatkami i z Novym godam
လက်ဗီးယန်း (Latvian) = Priecigus Ziemas Svetkus un Laimigu Jauno Gadu
လစ်သိုနီးယား ( Lithuanian) = Linksmu sventu Kaledu ir Laimingu Nauju Metu
ကက်ဒ်လူမျိုး (Kurdish) = Seva piroz sahibe u sersala te piroz be
ဘင်္ဂလားဒေရ်ှလူမျိုး = Shuvo Naba Barsha
နီပေါလူမျိုး = Krist Yesu Ko Shuva Janma Utsav Ko Upalaxhma Hardik Shuva & Naya Barsa Ko harkik Shuvakamana
မော်လဒိုက်ကျွန်းသား = Ufaaveri aa ahareh
မာလ်တာကျွန်းသား ( Malta ) = Nixtieklek Milied tajjeb u is-sena t-tabja
Nixtieqlek Milied Tajjeb u Sena Tajba
အာရပ်ဘာသာစကား = Kul sanna wa'intum b'kheir
Eid Meelad Sa'eed
အီဂျစ်လူမျိုး = Colo sana wintom tiebeen
အီရတ်လူမျိုး = Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
လက်ဘနွန်လူမျိုး = Milad Saeed wa Sanaa Mubarakah
ဟီဘရှုဘာသာစကား = Khag molad sameakh veshana tova
အာရမိုက်စ်ဘာသာစကား = do bri'cho o rish d'shato brich'to
ဆိုမားလီးယားလူမျိုး = ciid wanaagsan iyo sanad cusub oo fiican
မွန်ဂိုလီးယားလူမျိုး = Zul saryn bolon shine ony mend devshuulye
ဂျော်ဂျီယာလူမျိုး ( Georgian) = Gilotsavt Krist'es Shobas & Gilosavt akhal ts'els
Gilotcavt shoba-akhal ts'els
မီဂါလီလူမျိုး ( Mingrelian) = k'irses mugoxuamant & axal ts'anas mugoxuamant
ကိုးရီးယားလူမျိုး = Sung Tan Chuk Ha Chuk Sung Tan
တရုတ်လူမျိုး (မေဒင်) = Kung Ho Hsin Hsi
တရုတ်လူမျိုး (ကန်တုန်) = Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun. Ching Chi Shen Tan
တိဘက်လူမျိုး = Nhu Da Ya Vintuna
ဗီယက်နမ်လူမျိုး = Chung Mung Giang Sinh
Mung Le Giang Sinh. Cung Chuc Tan Nien
ဖီလစ်ပိုင်လူမျိုး = Mangamgam Bawaadawun sikua diaw amin ....
ဒီန်းမတ် အင်္ဂလိပ် dictionary နှင့် ကာတွန်းဓါတ်ပုံကို http://www.blogbogstaver.dk/ordkloeveren/2008/12/god-jul-alle-sammen.html မှ ယူသုံးထားသည်။
ရှာဖွေတင်ပြခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်။ အမှားအယွင်းများရှိပါက လူလ၏ ညံ့ဖျင်းမှု ဖြစ်၏။ တချို့သော စကားလုံးများကို မသိသဖြင့် သက်ခိုင်အကြောင်း ရေးသားနေသော ကိုမင်းဒင်ထံတွင် အကူအညီ တောင်းခံထားပါသည်။ ( စကားလုံး တစ်လုံးကို ဘတ် ၁၀ တန်ဖိုးရှိသဖြင့် ဘတ် ၁၀၀ အကြွေးတင်နေပါသည်။)၊ သူငယ်ချင်းတယောက်က မြန်မာသုံး ခရစ္စမတ် မပါကြောင်း၊ ဝေဖန်ပေးလို့ မြန်မာသုံး ခရစ္စမတ် တွေးမိသလို ထည့်လိုက်၏။ မှားရင် ထောက်ပြနိုင်ပါသည်။
Posted by လူလ at Wednesday, December 24, 20085comments:
အရှေ့ နှင့် အနောက်
အသင့်အတင့်ရှိသော နယ်နမိတ် အကျယ်အ၀န်း နယ်မြေတခုတွင် လူသားတို့သည် ဇနပုဒ် ရွာ မြို့ တည်ထောင်ပြီး၊ လူသား အမျိုးအနွယ်များအဖြစ် သတ်မှတ်၍ ဒိုးတူပေါင်းဖက် လူ့ဘောင်တခု တည်ထောင်၍ ရှင်သန် နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ လူအမျိုးအနွယ်စုများသည် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာဒေသများကို ရွေ့ပြောင်းစနစ်မှ အတည်အကျနေထိုင်ခြင်းသို့ လူနေမှု အဆင့်အတန်းကို အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲ လုပ်ယူလာခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာသည့်လျှောက် လူအမျိုးအနွယ်စုကို ကြပ်မတ် ထိန်းသိမ်းရန် ခေါင်းဆောင် အဖြစ် တင်မြောက် ရွေးချယ်လာသည်။ ထိုခေါင်းဆောင်သည်လည်း ထိုအမျိုးအနွယ်စု၏ ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးသူများ၊ ရှေ့ဆောင် လမ်းပြသူများအဖြစ် အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားက ပေးဆောင်သည့် ဘဏ္ဍာအခွန်များမှ အခကြေးငွေများ ယူငင်ပြီး အမျိုးအနွယ်စု ကာကွယ်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရသည်။
အိုးလုပ်သည်က အိုးအကြောင်း၊ တံငါသည်က ငါးတို့၏ သဘာဝ၊ မုဆိုးသည် တောအနေအထားနှင့် တောသတ္တ၀ါများ၏ အလေ့အကျင့်များကို ကြွမ်းကျင်စွာ သိထားသလို၊ လူ့အမျိုးအနွယ်စုကို ဦးဆောင်သူများသည်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ပညာရပ်များကို ကောင်းစွာသိမြင်လာပြီး မိမိ၏ မျိုးဆက်အား သင်ကြား၍ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတရပ်ကို ဖန်တီးပြီး ဘုရင့်မျိုးဆက်ကို သွတ်သွင်းလာသည်။ ထို့ကြောင့် လောကနိတိအရ လူ့ဇာတိအနွယ်များတွင် မင်းမျိုးဟု ဆိုသော အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား၊ ပုဏ္ဍာမျိုးဟု အမည်ရသော အတတ်ပညာဖြင့် အသက်မွေးသော လူတန်းစား၊ ဥစ္စာဓန အသင့်အတင့် အရောင်းအ၀ယ်ပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေးသော ကုန်သည်မျိုးနှင့် သူဆင်းရဲမျိုးနွယ်ဟု အဆင့်အတန်းကို ခွဲခြားပြသ ထားသည်။ စစ်မှုထမ်းသည့် မျိုးရိုး၊ ခ၀ါသည်မျိုးရိုးစသော အမျိုးများစွာ ရှိပါသေးသည်။
အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားများက အကျင့်ပျက်လာ၍ ဥပဒေသများ ထုတ်နှုတ်ပြီး အာဏာကို ထိန်းချုပ်လာသဖြင့် စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ် ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိုမှတဆင့် ဘုရင် ဘုရင်မများကို ဦးသျှောင်အဖြစ် ထားရှိပြီး ဥာဏ်ပညာများစွာ ပြည်စုံသော လူထုအကျိုးပြု နိုင်ငံရေးသမားများ ချုယ်လှယ်သည့် နိုင်ငံရေးစနစ်များ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ အင်္ဂလန် စပိန် ဟော်လန် ဂျပန် ထိုင်း နှင့် စကင်နေဗီးယမ်း သုံးနိုင်ငံ တို့တွင် ကျင့်သုံးနေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း သီပေါမင်းလက်ထက်တွင် ကင်းဝန်မင်းကြီးနှင့် အပေါင်းအပါများက စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်ကို အစပြုရန် ကြံစည်သေးသည် ဟု ဖတ်မှတ်ဖူး၏။
ဘုရင်မရှိသော မျိုးနွယ်စုများဖြစ်သည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဂျာမန် အိန္ဒိယ နှင့် ကမ္ဘာအနှံအပြား ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြင့် ကျင့်သုံးနေသော နိုင်ငံများသည် သမ္မတ ဦးစီးစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေသည်။
၎င်းအပြင် ဘုရားနိုင်ငံတော်ဟု စိတ်ကူးဖြင့် အကြွင်းမဲ့အာဏာကို ရဟန်းအကြီးအကဲများထံ အပ်နှင်းထားသည့်နိုင်ငံများမှာ ဗာတီကန်နှင့် ယခင် တိဘက်ဒေသတို့ ဖြစ်သည်။
၎င်းစနစ်သည် သမိုင်းခေတ်အလယ်တွင် ခေတ်စားပြီး အထူးသဖြင့် ဥရောပ၌ ပုရဟန်းမင်းများ ကြီးစိုးသောခေတ်ဟု သမိုင်းထွင်ခဲ့သည်။
သိုဖြစ်ပါ၍ အချုပ်အခြာ အာဏာသည် ပြည်သူ့ထံမှ ဆင်းသက်လာခြင်းနှင့် အချုပ်အခြာ အာဏာသည် နိုင်ငံတော်မှ ဆင်းသက်လာခြင်း နှစ်မျိုးရှိသည်ဟု ယေဘူယ ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သည်။
အချုပ်အခြာသည် အထက်မှ ဆင်းသက်ခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်က ဆင်းသက်လာခြင်း
အချုပ်အခြာအာဏာသည် နိုင်ငံတော်မှ ဆင်းသက်လာသည်ဆိုသော နိုင်ငံများသည် တပါတီစနစ်ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံများ၊ ဘုရင်စနစ်ကို လက်ခံသုံးနေသော မူစလင်နိုင်ငံများ၊ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး အုပ်ချုပ်သော နိုင်ငံများတွင် တွေ့ရသည်။
အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားများသည် မိမိပိုင် လွတ်တော်၊ စစ်တပ် များကို ကိုယ်ပိုင်အဖြစ် အသုံးပြု၍ တိုင်းပြု ပြည်ပြု ဥပဒေများကို ဖျက်သိမ်းခြင်း မွန်းမံခြင်း အသစ်ပြုခြင်းများစသော အခွင့်အရေးများ ရရှိသည်။ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ကျူးဘား ဗီယက်နမ် လော နှင့် မြောက်ကိုးရီးယား စသော ကွန်မြူနစ်ပါတီ မင်းမူအုပ်ချုပ်သော နိုင်ငံများ၊ ရေနံဖြင့် ချမ်းသောသော အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာရပ်ဘုရင့်နိုင်ငံ၊ ဘရှုနိုင်းနိုင်ငံနှင့် လစ်ဗျား မြန်မာ နှင့် အီရတ် (ဆာဒမ်ဟူစိန်လက်ထက်) နိုင်ငံများသည် စစ်တပ်ကို အင်အားပြုပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြင့် အုပ်ချုပ်သော နိုင်ငံများ ဖြစ်သည်။
ထိုတိုင်းပြည်တို့တွင် ပြည်သူများသည် အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားများ သက်သက်သာဖြစ်၍ တိုင်းပြည် ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးခွင့်၊ တိုင်းပြည် အနာဂါတ်ကို လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ပေးခွင့် ဆုံးရှုံးနေရသော သူများဖြစ်သည်။ သံမဏိစည်းကမ်းများဖြင့် ချမှတ်ထားသည့် ဘာသာတရား၊ ပါတီ၊ စစ်တပ်၏ မူဝါဒအောက်မှသာလျှင် သဘောထား ပေးခွင့်ရရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ တင်းကြပ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများကို ကျော်လွန်ပြီး သဘောထားများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သူကို နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံရပြီး ကြီးလေးသော အပြစ်ဒဏ်များဖြင့် အပြစ်ပေးခံရတတ်သည်။ မိမိကံကြမ္မာကို မိမိဖန်တီးနိုင်စွမ်း အလွန်နည်းသော စနစ်တခု ဖြစ်သည်။
ထူးခြားသည်မှာ ထိုနိုင်ငံများတွင် တဦးတယောက်အစွမ်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အသင်းအဖွဲ့များဖြင့် လည်းကောင်း သွေးထွက် သံယိုမှုများဖြင့် နိုင်ငံတော် အာဏာကို ရယူထားကြသည်။ ထိုအချုပ်အခြာ အာဏာသည် မိမိတို့ လုပ်ယူထားသော သဘောဖြင့် ၎င်းတို့ လိုအပ်သည့် ဥပဒေများကို ရေးဆွဲခြင်း၊ အဓိပ္ပါယ် နှစ်ခွရှိသော၊ ထင်ရောင်မှားဖြစ်စေသော ဥပဒေများကိုလည်း ရေးဆွဲခြင်းများနှင့် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေသည်။ ဤသည်မှာလည်း ရှေးကျနေသော ဘုရင်စနစ် ပုံစံ ဖြစ်သည်။
၎င်းအပြင် အာဏာရှိသူသည် မိမိအာဏာကို နှစ်ရှည်စွဲကိုင်ခွင့် ရရှိသည်။ အကျိုးအဆက်အရ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သဘောတော်ကျသည့် လူတန်းစားမျှသာလျှင် အဆင့်အဆင့် အာဏာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ခြေ အာဏာပိုင်များသည် မိမိ၏ အာဏာ တည်မြဲရေးအတွက် အထက်ဆိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အလိုက်အကြိုက်ကိုသာ ကြည့်ရှု့ပြီး အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားဖြစ်သော ပြည်သူပြည်သားများ၏ အကျိုးများကို မကြည့်ရှု့သဖြင့် ပြည်သူများ အတိဒုက္ခများ ကြုံတွေပြီး ဆင်းရဲစွာ အသက်မွေးမြူ
နေရတတ်သည်။ ထို့အပြင် ပြည့်သူများထံမှ မိမိတို့သဘောအရ ဇွတ်အတင်း ငွေများ ကောက်ခံပြီး မိမိပိုင် ငွေများကဲ့သို့ အသုံပြုကြသည်။ အထက်အောက်ဆိုသော အာဏာစီးဆင်းမှုသည် သမရိုးကျမဟုတ်ပဲ အပေါ်အကြိုက်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ လာဒ်ပေးလာဒ်ယူ စနစ်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြည်သူ့ စီမံကိန်းများကို လော်ဖါးသော သူများ၊ နီးစပ်သော သူများကို လုပ်ခွင့်ပေးခြင်း၊ အောက်ဆိုသော အာဏာမဲ့များကို ဖိနှိပ်ပြီး သတင်းအမှားများ အထက်ကို တင်ပြခြင်းများသည် တဦးပိုင်အာဏာ၏ အကျိုးအပြစ်များသာဖြစ်ပြီး လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းသည် ပျက်သှဉ်းခြင်းကိုသာ ဦးတည်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထို့အပြင် အကြီးအကဲဆိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည်လည်း တိုင်းပြည်တွင်ရှိသော အရာရာကို သူတို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး သူတို့သာလျှင် ပြည်သူ ပြည်သားများ၏ အသက်အိုးအိမ်ကို ကာကွယ်နေခြင်း၊ ပြည်သူပြည်သားများကို ထမင်းကြွေးထားခြင်း၊ သူတို့ မင်းဖြစ်သည့်အချိန် ပြည်သူများအား ရှေ့အုပ်ချုပ်သူများ၏ စနစ်ဆိုးမှ ကယ်တင်ထားခြင်းနှင့် တိုင်းပြည်ကို ချောက်အတွင်းက ဆွဲတင်ထားခြင်း စသော အတွေးများ လွဲမှားစွာ ရှိနေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်၏ ကံကြမ္မာသည် တဦးတယောက် လက်ထဲတွင်သာ ရှိပြီး ထိုသူများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆိုးကျိုးကို ပြည်သူများသာလျှင် ဆင်းရဲခြင်းအတိဖြင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းစနစ်သည် တိုင်းပြည်နှင့် တိုင်းသားပြည်သူတို့၏ အနာဂါတ်သည် နိုင်ငံတော်ဆိုသည့် အာဏာပိုင်များလက်ထဲသာ ရှိသည်။
၎င်းစနစ်တွင် အုပ်ချုပ်သူသည် မင်းကျင့်တရား ၁၀ ပါးအညီ ဦးဆောင်မှုပေး၍ ပြည်သူများအား ရင်ဝယ်သားဟု ထင်မှတ် အုပ်ချုပ်ပြီးလျှင် နယ်နမိတ်အတွင်း သယံဇာတများဖြစ်သော ရေနံဖြင့် ချမ်းသာသော၊ စီးပွားရေးကို နည်းလမ်းမှန်စွာ အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော တိုင်းပြည်များသာလျှင် ပြည်သူဘ၀ အသင်အတင့် သာယာငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ရရှိသည်။ ၎င်းသည်လည်း လူ တစ်ထောင်တွင် တယောက်လောက်သာ ရှားရှားပါးပါး ရှိသည်ကို ယနေ့ကမ္ဘာတွင် တွေ့ရသည်။
အချုပ်အခြာ အာဏာသည် ပြည်သူ့မှ ဆင်းသက်လာခြင်း
ဤုစနစ်သည် သယံဇတများ ချို့တဲ့သော နိုင်ငံများတွင် အများအားဖြင့် တွေ့ရတတ်သည်။ မိမိ ကံကြမ္မာ မိမိ ဖန်တီးခွင့် ရှိသော စနစ် ဟု ဆိုရမည်။ ခရိုင်တခု သို့မဟုတ် မြို့ရွာ ဒေသ တခုအတွင်း ပြည်သူများသည် အကြိမ်ကြိမ် စုဝေး သဘောတူညီချက် ဥပဒေသများ ယူထုတ်ပြီး ကွန်မြူးဆိုသော တမြို့လုံးသက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့တခုကို တည်ထောင်ကြသည်။ ထို့နောက် မိမိတို့ အစွမ်းဖြင့် ရရှိထားသော ပိုင်ဆိုင်မှု တချို့တ၀က် ( ဥပမာအားဖြင့် ဆယ်ဖို့ တစ်ဖို့ )ကို ဒေသ မြူနီစပယ်ဆိုသည့် အဖွဲ့ကို ပေးဆောင်ရသည်။ ထိုအပြင် နိုင်ငံတော်ဆိုသော တိုင်းပြု ပြည်ပြု အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း မြို့နယ်ကို ထည့်ဝင်ရသည့် ပမာဏထက် အနည်းငယ်လျော့ပြီး ပေးဆောင်ရ၏။ ထိုထည့်ဝင်ရသည့် အခွန်ဘဏ္ဍာများကို စုဆောင်းပြီး မြို့နယ်အတွင်း ဘာသာရေးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ အိုနာကျိုးကန်းများအား ပြုစုစောင့်လျှောက်ရန် အဆောက်အဦး၊ အလုပ်လက်မဲ့များအား ထောက်ပံခြင်း၊ အခမဲ့ဆေးကုသခွင့်ရှိသော ဆေးရုံနှင့် အများအသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အဦးများကို ဆောက်လုပ်ခြင်း မွန်းမံခြင်းဖြင့် လူအသိုင်းအ၀ိုင်းတခု တိုးတက်အောင် အသုံးပြုသည်။ နိုင်ငံတော်ဟူသော အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းသို့ ပေးဆောင်ရသည့် အခွန်ဘဏ္ဍာက တိုင်းပြည် ကာကွယ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ကောင်းမွန်ရေးတို့တွင် အသုံပြုကြသည်။
ဤသို့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ပြည်သူများ အချိုးကျ ထည့်ဝင်ထားသည့် အခွန်ဘဏ္ဍာများကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးစွဲခြင်း မပြုရပေ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုဘဏ္ဍာသည် ပြည်သူများမှ ကောက်ယူသော အခွန်များဖြစ်သဖြင့် တိုင်းပြု ပြည်ပြု လုပ်ဆောင်နေကြသည့် သူများသည်လည်း ပြည်သူ့အတွင်းက ပြည်သူသဘောထားဖြင့် ရွေးချယ်လိုက်သော သူများ ဖြစ်သောကြောင့် တလွဲသုံးစားခြင်း ပြုလုပ်မရပါ။ ထိုသူများသည်လည်း အခွန် ပေးဆောင်ရသော သူများ ဖြစ်သည်။ အခွန်ထမ်းခွင့် လွတ်ကင်းနေသည့်သူများ မဟုတ်ပါ။ ငါသည် တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်နေသူဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာများကို မိမိ လုပ်အပ်သလို ထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့်ရသည် ဟူသော သဘောမျိုးတော့ လုပ်လိုလည်း မရနိုင်ပါ။
သို့သော် ချွင်းချက်အနေဖြင့် ပဒေသရာဇ် ဘုရင်စနစ်ကနေ စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်သို့ ကူးပြောင်းထားသည့် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းများတွင် ဘုရင်ကို တိုင်းပြည်၏ သင်္ကေတဖြင့် ထားရှိပြီး တိုင်းပြု ပြည်ပြု အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင်ဖြစ်သော နိုင်ငံတော်က ဘုရင့် မိသားစုအတွက် လစာများ ပေးဆောင်ရသည်။ သူတို့သည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုသည်လည်း ၎င်းမျိုးဆက်သည် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းဖြစ်သော တိုင်းပြည် နယ်နမိတ်ကို တည်ထောင်ပေးခဲ့သော သူများဖြစ်သည်ဟု ပြည်သူ ပြည်သားများက လက်ခံ နှက်သက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ နောက်တချက်က ပဒေသရာဇ်ခေတ်၌ ဘုရင့်အသိုင်းအ၀ိုင်းသည် ပြည်သူများ၏ ဆက်သသော ဘဏ္ဍာများကို မိမိအကျိုးအတွက် သုံးပြုခဲ့လေဟန် ရှိသည်။ အများအားဖြင့် သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်သည် မိမိ၏ အာဏာတည်မြဲမှုကိုသာ ဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်သူ့အကျိုးကို မလိုလားသည့်ကများသဖြင့် ဘုရင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်လိုက်သည့် သဘောဟု ထင်ရသည်။
ပြည်သူ့ အခွန်များဖြင့် တိုင်းပြု ပြည်ပြု လုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်း ပြည်သူများအား ဆန္ဒ သဘောထားများ ချပြ ဆွေးနွေးရသည်။ ဥပမာ စစ်ပြုခြင်း၊ စစ်ခံခြင်းနှင့် တိုင်းပြည်၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ၊
ပြည်သူများသည်လည်း မိမိ၏ ဆန္ဒ သဘောထားများကို လွတ်လပ်စွာ တင်ပြ ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်အပြီး မတင်မကျဖြစ်သည့် အကြောင်းကိစ္စများကို မဲစနစ်ဖြင့် ဆန္ဒကောက်ယူပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရသည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြည်သူတဦးတယောက်သည် သဘောမတူသည်ဖြစ်စေ၊ တူသည်ဖြစ်စေ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ထားသည့် ရလဒ်ကို လက်ခံပြီး ပါဝင်ပူးပေါင်း ဆောက်ရွက်ရသည်။
ဥပမာ၊ ၊ ခေတ်နှင့်အညီ ယှဉ်ဘောင်တန်းချင်သဖြင့် တိုင်းပြည်တွင်ရှိသော ပြည်သူများက တယ်လီဗေးရှင်း ကြည့်ချင်သည် ဆိုပါစို့၊ မည်သို့ ပြုလုပ်သင့်သည်များကို နွေးဆွေး ငြင်းခုန်ပြီး အများသဘောတူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချမှတ်ပြီး၊ ထိုကုန်ကျသည့် ငွေပမာဏအတွက် ပြည်သားတိုင်း အချိုးကျ ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ်သည်။ တနှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေပမာဏကို ထည့်မနေရ ပေးဆောင်ရသည်။ မပေးဆောင်သည့် သူသည် လက်ရှိ အများသဘောတူသော ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုဥပဒေသည် ပြည်သူများက ချမှတ်သဘောတူပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ဥပဒေများကို ပြုသည့် လွတ်တော်ဆိုသော အဖွဲ့အစည်းက အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သဖြင့် ထိုပြည်သူများကပင် လက်ခံရသည်။
ထိုဥပဒေသည် အထက်ဆိုသော တဖွဲ့ တဦးတယောက်မှ ဆင်းလာသည့် တင်းကြပ်သည့်ဥပဒေ မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူပြည်သားတိုင်းသည် နိုင်ငံ၏ အရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို တရားဥပဒေအရ ခံစားရရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်သူပြည်သားများ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်မူအရ အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းတွင်လည်း မိမိတို့၏ သဘာဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ ပြည်သူ့အကျိုး မျှော်ကိုးပြီး နိုင်ငံရေးကို ပြုလုပ်လိုသည့် လူတစုသည်လည်း လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့ တည်ထောင်ကြသည်။ ထိုအရာကို နိုင်ငံရေးပါတီဟု ခေါ်ဆို၏။ အများအားဖြင့် တိုင်းပြည်တပြည်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီသည် အနည်းဆုံး ၂ ဖွဲ့ တည်ရှိပြီး အများဆုံး ၆ ဖွဲ့လောက်သာ တည်ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံ၏ အရေးကို အဓီကအကြီးဆုံး ပါတီနှစ်ရပ်က သာလျှင် ချယ်လှယ် ခွင့်ရရှိသည်။ ထိုပါတီကြီး၏ တဖွဲ့တွင် မြေရှင်ကြေးရှင်များ အများဆုံးပါဝင်ပြီး ကျန်ရှိသော ပါတီကြီးတွင် ဆင်းရဲသားများ၊ အလုပ်သမားများနှင့် ပညာတတ်လူတန်းစားများ ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အာဏာကိုပါတီကြီး နှစ်ခုမှ ခေါင်းဆောင်များအား ပြည်သူပြည်သားများ၏ မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ် တင်မြောက်ကြသည်။ တင်မြောက်ခံရသော ပါတီသည် တိုင်းပြည်အား လေးနှစ်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိပြီး၊ နောက်ထပ် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပြန်လှည် အရွေးခံ ယှဉ်ပြိုင်ရသည်။ ၎င်းသည်လည်း အာဏာကို ပါတီတခု သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးထံတွင် ကြာရှည်စွာ မထားလိုသည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တိုင်းပြည်အရေးကို ဆောင်ရွက်သော ပါတီဝင်ခေါင်းဆောင်များသည် ပညာအရည်အချင်း ပြည့်စုံခြင်း၊ အကျင့်သီလကို ကောင်းစွာ စောင့်ထိန်းခြင်းများ ရှိမှသာ မိမိပါတီဝင်များနှင့် ပြည်သူပြည်သားများ၏ ယုံကြည်အားထားခြင်း ခံရသည်။ ထို့ကြောင့် အာဏာသည် ပြည်သူ့ ထံမှ ဆင်းသက်လာသည့် သဘောပင် ဖြစ်သည်။
ဆင်းသက်လာသည့် အချုပ်အခြာအပိုင်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရလျှင် အာဏာခွဲဝေမှုသည် ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိက ပြသာနာအဖြစ် တည်ရှိနေသည်။ စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်ကဲ့သို့ စည်းမျဉ်းခံ စစ်တပ်စနစ်ကို ပုံစံချနေသည်ဟု တွေ့ရှိရသည်။
Posted by လူလ at Saturday, December 20, 20082comments:
“မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင် ကြိုးစားမည်”
ကဲ.. ဘယ်လိုတွန်းမလဲ ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို တင်ပြီးနောက် စီဘောက်၌ ကိုငရဲလား မငရဲလားတော့ မသိပါဘူး။ အိုင်ပိကို ကြည့်တော့ တမျိုးစားတဲ့ ယိုးဒယားက တက်လာသော မိတ်ဆွေတယောက်က စီဘောက်မှာ “ အဲလိုမျိုး ရေးလိုက်လို့ တော်လှန်ရေး အောင်မလား၊ အမှန်တိုင်းပြောရရင် မင့်ကရော ဘာလုပ်နေသလဲ” လို့ အော်သွားတယ်။ ခန့်မှန်းရသလောက် မဲဆောက်ဖက်က တက်လာတဲ့သူ ဖြစ်နိုင်သည်
ဝေဖန်ခြင်းကို နှက်သက်တဲ့ လူတယောက်အတွက် ဒါတွေဟာ စိတ်ဆိုးစရာလည်း မမြင်သလို၊ ၀မ်းနည်းခြင်းလည်း မဖြစ်ခဲ့ပါ၊ ထိုသူအား မိတ်ဆွေအစစ်အဖြစ်သာ ကျွန်ုပ် မှတ်ယူ၏။
အခုလို ဝေဖန်အကြံပြုပြောဆိုသွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ကျွန်ုပ် လေးစား၏။ နို့မို့ရင် အဖြေမလာ အသွင်ဗလာဖြင့် အခက်များ တွေ့ရပြီး ရှုပ်ကုန်နေမှာလေ။ စာရေးတာ ကောင်းလိုက်တာ ၊ ကဗျာလေးကို ခံစားသွားတယ် စသော စကားနည်း ရန်စဲ ဝေဖန်မှုများထက် သာ၍ အခုလို ဝေဖန်သွားခြင်းကို အလွန်စွာ နှက်သက်ပါ၏။
ကျွန်ုပ်၏ လွင့်မျောခြင်း ဆိုသည့်အပိုင်းတွင် စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ လက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့ခြင်း၊ စိတ်ကူးမှတဆင့် လက်တွေ့ကို မျှော်ရမ်းခြင်းနှင့်၊ လက်တွေ့ဖြစ်ပွားမှုမှတဆင့် အားနည်း အားသာချက်များကို စိတ်ကူးဖြင့် လွင့်မျောခြင်း စသော စသော စိတ်ခံစားမှုများကို ရေးသားနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ကွိုင်ခြင်းဆိုသော ကိုယ့်တဖက်သတ် အမုန်းပွားနေသည့် ဒါမဟုတ် ကိုယ့်ရန်သူက
မည်သည့် အကြောင်းကိစ္စ ပြုပြု၊ တဖက်စောင်းနင်းပြီး ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ကွိုင်မှု ပြုသည်ဟု သတ်မှတ်ရမည်။ လက်ဖ၀ါးတဖက်ကို ထောင်၍ မြင်သည့်ဖက်မှ ကိုယ်လိုရာကို ဆွဲတွေးပြီး သူ့ဖက် ကိုယ့်ဖက်မြင်သလို အမြင်များက ဘယ်တော့မှ မတူနိုင်သည့် အနေအထားကို ရန်ဖက်ဆောင်သည့် ဝေဖန်မှုဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
နောက်တမျိုးက မိတ်ဖက်ဆောင်ပြီး အကြံပြု ထောက်ပြခြင်းကို အပြုသဘောဆောင်သော ဝေဖန်ခြင်းဟု သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ ပြုမှုခြင်းသည်လည်း အာဂတ အငြိုးဖြင့် ရန်ဖွဲ့ခြင်း၊ စောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်း မဟုတ်ပေ၊ ရှိခဲ့ပြီးသော အဖြစ်အပျက်များကို ကြုံတွေ့ရပြီး အမြင်ကို အပြုအသွင်ဆောင်ပြီး အကြံပြုခြင်းသာ ဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အထက်တန်းကျောင်းများတွင်
“မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင် ကြိုးစားမည်။
မိမိအတန်းကို ကောင်းအောင် ကြိုးစားမည်။
မိမိကျောင်းကို ကောင်းအောင် ကြိုးစားမည်။
မိမိတိုင်းပြည်ကို ကောင်းအောင် ကြိုးစားမည်။ ” ဟု၍
ကျောင်းတက်သည့် အချိန်များတွင် သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန် ဆိုရခြင်းကို ပြုရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဘ၀၏ အစ လူမှန်းသိက ဆိုလိုက်ရသည့် ပထမဦးဆုံး သစ္စာတခု ဖြစ်သည်။ တစုံတရာ၏ တိုက်တွန်းမှုအရ ဆိုသည်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ပါ လက်ပါ ဆိုသည်ဖြစ်စေ သစ္စာသည် သစ္စာတခု ဖြစ်သဖြင့် မသိစိတ်များကို လွမ်းမိုးခဲ့ပါသည်။ ဆိုခဲ့ရသည့် သစ္စာ သဘောအရ ဘ၀၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်လည်း ၎င်းသစ္စာက လွမ်းမိုးနေသည်။
မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင် ကြိုးစားနေသည်ဟု ဆိုရမလားမသိ။
အမှန်တိုင်း ပြောရရင် မိမိရပ်တည်မှုကို ရိုးသားစွာ ဖြတ်သန်း ရှာဖွေနေပါသည်။ သူတပါး၏ ပေးကမ်းခြင်း စောင်မခြင်း လှူခြင်းမှ ကင်းပြီး ကိုယ့်၏ လုပ်အားဖြင့် အသက်မွေးမြူနေပါသည်။ ဒါတောင် လူဆိုသည်မှာ လူ့ဘောင်အတွင်း နေထိုင်ရသဖြင့် သူများကို ဒုက္ခမပေးပဲ အေးဆေးစွာ နေထိုင် အသက်မွေးမြူနေသည်ကိုပင် အပြစ်တခုလို စောင်းမြောင်း ဝေဖန်ခြင်း ခံနေရသည်။ သူများ ထောက်ပံဖြင့် အသက်မွေးမြူနေလျှင် ပို၍ ဝေဖန်မှုကို ခံရတတ်သည်။ ကဲ့ရဲ့ခြင်း ခံရတတ်သည်။ ဤကား လောက၏ ဒဏ်များ ဖြစ်၏။ မည်သူမဆို ကြုံတွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။
အသက်မွေးမြူသည့် အပိုင်းတွင် နှစ်မျိုး ရှိပါ၏။ တမျိုးစားက
ရဟန်း ရသေ့ သူတော်စဉ်များ၊ နိုင်ငံအရေးကို ပြုသူများဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးသမားများ၊ တော်လှန်ရေးသမားများ၊ စစ်တပ်တွင် အမှုထမ်းနေသူများက အများ ပြည်သူနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်နေသော သူများဖြစ်သဖြင့် အများနှင့်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ထိုသူများသည် သူတပါး၏ အထောက်အပံကို မှီခိုပြီး လောကီ၊ လောကုတ္တရာများကို ပြုနေသောသူများ ဖြစ်သည့်လျှောက် အများဆိုသည့် လူပရိဿတ်၏ အသံကို ဂရုပြုမှသာလျှင် ကောင်းပါသည်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သော ပြည့်သူ တုန့်ပြန်သည့် အသံ၊ သဘောထားများကို ဇွတ်အတင်း လုပ်ယူခြင်းမဟုတ်ပဲ စစ်မှန်သော ပြည်သူ့ဆန္ဒကို နားထောင် တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ထိုမှသာလျှင် မိမိ လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ပြီး မှန်ကန်သော လူ့ဘောင်တခု ပေါ်ပေါက်လာမည် ဖြစ်သည်။ သို့ဗေမဲ့ လူဆိုသည်မှာ အတ္တများသည့် သတ္တ၀ါဖြစ်သည့်လျှောက် သူတပါး အမြင်များကို မမြင်၊ မိမိကိုယ် မိမိ မှန်ကန်နေသည် ဟု ထင်နေရတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝေဖန်ခြင်းများဖြင့် ထိန်းညှိပေးရ၏။
လောက၌ မိမိကိုယ်အား ကောင်းအောင် ကြိုးစားရသလို မိမိအသင်းအဖွဲ့ကိုလည်းကောင်း မိမိလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကို လည်းကောင်း၊ မိမိ နိုင်ငံအတွက် လည်းကောင်း တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေရသည့် သူသည် အကောင်းဆုံးသော လူသားအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
လူမှန်းသိတတ်ကနေ စပြီးတော့ တောခို၍ လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို စွဲကိုင်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်လာတယ်ဆိုတော့ သူများ ထောက်ပံဖြင့် စားသောက်နေရတယ်လေ။ အများနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရတွင် ကိုယ့်စီးပွားကို ထုတ်နှုတ်သုံးစွဲပြီး ပြုလုပ်နေရသည်မဟုတ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ပြည်သူများ သို့မဟုတ် ထောက်ခံသူများ၏ အထောက်ပံ့ဖြင့်သာ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရသည်။ ပြည်သူများ ဒါမဟုတ် ထောက်ခံသူများက ထောက်ပံလိုက်သည့် မည်သည့်အရာမဆို နိုင်ငံအရေးကို ပြူသူများအတွက် ပေးချင်သာဖြစ်ပြီး မောင်ဖြူ မောင်နီ မောင်မဲ လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ပေးချင်းမဟုတ်ပါ။ ထင်သလိုလုပ်လိုလည်း မရပါ၊ ကိုယ်ကျိုးပြု၍လည်း မရ၊ အလွဲသုံးစားမှု သက်ရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လည်း ဘ၀အပေးအသိရ မြင်လာခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံတခု ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် စိန်စီသောညများ ဗွီဒီယိုခွေ ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ဗိုလ်သန်းရွှေသည် မြန်မာ ပြည်သူများ၏ ဝေဖန်သော ဒဏ်ကို အပြင်းအထန် ခံစားခဲ့ရသည်။ သူသည် အမှုထမ်းတယောက်သာ ဖြစ်၍ သူ့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် အုပ်ချုပ်ခံ လူတန်းစားများအတွက် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် အောင်မြင်သော စီးပွားရေးသမား မဟုတ်ပါ၊ အမှုထမ်းသည့် လူတယောက်သာဖြစ်သဖြင့် သူ့၏ အမှုထမ်းတသက်အတွင်း လစာကို ထွက်ချက်ခြင်းဖြင့် သူ့ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိနိုင်မည် ဖြစ်၏။ သို့သော် သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုက ထင်ထားသည်ထက် ပိုမို၍ ရှိနေသဖြင့် ထို ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဘ ခြောက်လုံးဖြင့် မေးခွန်း ထုတ်လာရသည်။ ထို့အတူ တခြားခြားသော တိုင်းပြည်များတွင် နိုင်ငံရေးကို ပြုလုပ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို စစ်တမ်များ ထုတ်ခဲ့သည်။ သို့မှသာ ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်အားထားမှုကို ရရှိမည်။
ယနေ့ ဖြစ်ပွားနေသည့် နိုင်ငံရေးအတွင်း မည်သည့်နိုင်ငံမဆို တချို့ နိုင်ငံရေးသမားများသည် ကိုယ်မှန်သည်ဟု ထင်ရသည့်အပိုင်းကို လက်ကိုင်ပြုပြီး တခြား ဆန္ဒများကို မျက်ကွယ်ပြုသလို ပြုလုပ်မရပါ။ ကောင်းမွန်နေသည့် လူအသိုင်းအ၀ိုင်းတခု ဗရမ်းပတာဖြစ်ပြီး ပျက်စီးရတတ်သည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်သူ့အသံကို အမြဲတစေ နားစွင့်ပြီး ပြည်သူအကျိုး ဆန့်ကျင်သည့် အပြုအမှုများကို မပြုမိအောင် အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့်လည်းကောင်း။ တစ်ဦးတစ်ယောက်သော် လည်းကောင်း ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်နေရသည်။ သူ့ ဆန်စားနေသရွေ့တော့ သူ့စကားပဲ မြေ၀ယ်မကျတော့ မဟုတ်ပါ ကောင်းသည် သင့်သည်များကို ယူငင်ရပါ၏။ ယူငင်ရသည့်အပိုင်းတွင်လည်း ပြည်သူထဲတွင်လည်း မိမိအကျိုးကို လိုလားသူ၊ မလိုလားသူ ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး အကြံအဥာဏ်များကို လက်ခံရပါသည်။
လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်က ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလည်တခေါက် ရောက်ခဲ့သည်၊ ဘန်ကောက် နှစ်ပတ်၊ မဲဆောက်တပတ်၊ ချင်းမိုင် နှစ်ပတ် အချိန်ရပါ၏။ ဆွေမျိုးများကိုတောင် မတွေ့ဖြစ်ပဲ တချိန်က အတူတူ လုပ်ဖူးလာခဲ့တဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်များကို တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ကြုံဆုံလိုက်ရတဲ့ အခြေအနေများတွင် အားလုံးက ရပ်တည်မှုဆိုသည့်အပိုင်းနှင့် လုံးပန်းနေရသည်။ ရပ်တည်မှုဆိုရတွင် အဖွဲ့အစည်း ရပ်တည်မှုနှင့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်ကျိုးရပ်တည်မှုဟု နှစ်ပိုင်းရှိသည်။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရပ်တည်မှုကို မဆိုလိုပါ၊ ဒါဗေမဲ့ တချို့သော တသီးပုဂ္ဂလ ရပ်တည်မှုများကို ဖေါ်ဆောင်နေသော သူများကို တွေ့မြင်ရပြီး၊ တချိန်တုန်းက မြိတ်ခရိုင် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသအတွင်း မိမိတို့ တပ်ရင်းမှ သွားရောက် လှုပ်ရှားစဉ် ထားဝယ်ခရိုင် ကွန်မြူနစ်ပါတီက ကိုသန်းထွန်းဆိုသော ဆက်သွယ်ရေးသမားတယောက်နှင့် ခင်မင်မိပါသည်။
သူ အမြဲပြောသည့် တော်လှန်စဉ်အတွင်း ဖြစ်တည်မှု ဟာသလေးတခုက ထိုတသက် မေ့နိုင်မယ်လို့ မထင်၊ နောက်တန်း လုံခြုံသည် ဒေသအတွင်း အသင်းအဖွဲ့တိုင်းသည် မိမိတို့၏ အလံ အရှေ့တွင် တန်းစီ သစ္စာဆို အလေးပြု တာဝန်ခွဲဝေခြင်းများ နေ့စဉ် ပြုလုပ်ရသည်။ မြိတ်ခရိုင် ကွန်မြူနစ် စခန်းတခုအတွင်း တန်းစီ အလေးပြုသည့် အချိန်ကို ကိုသန်းထွန်း၏ ဟာသက “ ပစ္စည်းမဲ့ အလံတော်အား အလေးပြု” အမိန့်ပေးလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အလေးပြုသည့် လက်များတွေ ရွှေတွဲလွဲ ငွေတွဲလွဲ လက်တွေဖြင့် အလံအား အလေးပြုနေသည်ကို တွေ့ရသည်ဟု သူ အမြဲပြောပါသည်။ ထားဝယ်ခရိုင် ကွန်မြူနစ်များသည် အလွန်ဆင်းရဲပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာမှု နည်းသည်။ တချို့တလေတော့ ရှိပါ၏။
လူဆိုတာ အတ္တဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်တာကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများနောက် လိုက်ရင်းဖြင့် မူလဘူတဆိုသော ရည်မှန်းချက်များ မသိမသာ ဆုတ်လျှော့လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုသည့် အနေအထားသည်လည်း တဦးတယောက်ဖြင့် မရ၊ မ တထောင်သားများဖြင့်သာ ပြုလုပ်ရသည်။ ပြုလုပ်နေသည့်အတောအတွင်း တဦးတယောက်က ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖြစ်သည့်ပုံစံဖြင့် ကြံဆောင်ခြင်း၊ တော်လှန်သည့်အချိန်တွင် မွေးနေ့ပွဲများကို ကြေးရေတတ်လူတယောက် မွေးနေ့ပြုလုပ်သလို ဆင်နွဲခြင်းတို့က ဂုဏ်ပဿနကို ဖေါ်ဆောင်နေခြင်း သက်သက်သာဖြစ်သဖြင့် မပြုလုပ်နိုင်သည့် တိုက်ဖေါ် တိုက်ဖက်ဖြစ်သော တခြားသူများအပေါ် သက်ရောက်မှု တစုံတရာ ရရှိသွားနိုင်သည်။ ထို သက်ရောက်မှုသည်လည်း ကောင်းရာသို့ လားခြင်းမဟုတ်ပါ။
အထက်ပါအခြေအနေများကို တွေ့မြင်ပြီးလျှင် “ မြို့ပေါ် ( ပြည်တွင်းမဟုတ်) မှာ တော်လှန်ရေး လုပ်ရမည်ဆိုလျှင် တသက်လုံး လုပ်နိုင်သည်ဟု ကောက်ချက်ချ ရေးသားခြင်းသာ ဖြစ်၏။ အားလုံးကို မဆိုလိုပါ တချို့ သော နိုင်ငံရေး ဘူဇွါများကို ထောက်ရှု့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
“ဒီလိုရေးလို့ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်မည်လား” ကို ပြန်လှည် ရှင်းပြလျှင် ပြည်သူတယောက်အနေ့ဖြင့် အတွေ့က အရှိဖြစ်လာပြီး၊ အရှိကနေ အသိတခုအဖြစ် ရေးသားခြင်း ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်ခြင်း ရှုံးနိပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပြုလုပ်နေသူ၏ လုပ်ဆောင်မှုများမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ရလဒ်သာ ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို စွန့်လွတ်လာပြီးနောက် ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် မိမိ ဘယ်လို ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းမလဲဟူသည့် အပိုင်းလည်း အဓိက စဉ်းစားရသည်။ ဆိုလိုသည်က မိမိ ရပ်တည်မှုကို ဘယ်လို သွားမည်နည်း မေးခွန်းပါ။ နောက်ဆုံး အဖြေတခုက ဘ၀ကို ကောင်းမွန်စွာ အသက်မွေးမြူခြင်းဆိုသော ဆုံးဖြတ်ချက်တခု ရရှိပါသည်။ ထိုကြောင့် မင့်ရော ဘာလုပ်နေသနည်းဟု မေးလာလျှင် “မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင် ကြိုးစားနေသည်” ဟု ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
Posted by လူလ at Sunday, December 14, 20084comments:
ကဲ.. ဘယ်လို တွန်းမလဲ
အမှန်ကိုမြင်တဲ့ ငါမျက်လုံးကို ဖေါက်ပါတော့လား….
ကိုမွန်းအောင် သီချင်းကို အချိန်ရှိတိုင်း ငြီးချင်းတပုဒ်လို အဖန်ဖန် စီးဖြန်းနေမိတော့တယ်။
ရိုးရိုးမြင်ပြီး မှန်မှန်လေး ပြောခဲ့တဲ့အတွက် လူတွေက တမျိုးထင်စရာ ဖြစ်နေတယ်။ ကီးဘုတ်အပေါ် လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကိုယ့်လက်ချောင်းကို ရိုက်ချိုးလိုက်ချင်တယ်။ ဒီလက်ချောင်းတွေ ရှိနေလို့ ရေးဖြစ်နေတယ် ဆိုပြီး တခါတလေ စဉ်းစားမိတယ်။
ကိုယ်ပိုင် စာမျက်နှာတခုဟာ ခံစားချက်များ သီကုံးရင်း ဘ၀ ဖြေဆည်ရာ တွက်ပေါက်တခု အနေဖြင့်သာ ဖွင့်ဆိုခြင်း ဖြစ်တယ်လေ။ ပရိဿတ်အကြိုက် မဖြစ်ရင်တော့ နေပါစေ၊ ကြုံခဲ့ ဆုံခဲ့ ဖြတ်ခဲ့ကာလများအတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသည် ၀ယ်လို့ မရှိသော ရှားပါး ကုန်ပစ္စည်းတခုလို ဖြစ်နေတာက အမှန်တရားလေ။ အတွေးအခေါ်တခုဟာ နောက်တချိန်မှာ မှန်လာမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးက စိုးမိုးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ရေးဖြစ် တွေးဖြစ်နေတာပါ။
မင့်တို့အကြိုက် ရိုက်ပြမယ်ဆိုတဲ့ ကိုကျော်ဟိန်းအတွက်တော့ ဘ၀ဆိုတာ နတ်ပြည်ပေါ့၊ နတ်တောင် ရိုးရိုးနတ်မဟုတ် နတ်ချစ် နတ်ခင်ပေါတဲ့ နတ်တပါး၊ အပူဇော်ခံ ပသခံ နတ်တပါး၊
အရှိကို အရှိတိုင်း ရိုးသားစွာ ပြောခဲ့တဲ့ ကိုဇာဂနာတို့လို လူမျိုးအတွက်တော့ ငရဲပြည် တခုလိုပါ။
ဒါက အာဏာရှင်အတွင်းစည်းမှာ ရှိတဲ့ အနေအထား
အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျော်လွန်ပြီး ဟိုတဖက်ခြမ်းကို မှန်းမျှော်ကြည့်လိုက်ရင်ဖြင့် တချို့သော တလွဲများကို ထောက်ရှု့ချင်ပါသော်လည်း သြော် အာဏာရှင်စနစ်ကို အားပေး အားမြောက် ပြုနေသလိုလို မြင်တတ်တယ်လေ။ လူနာကို သေဆေးထိုးနေခြင်း မဟုတ်ပါ၊ ရှိဖြစ်နေသော အနာ အရင်းအမြစ်ကို သိပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးသကဲ့သို့ ထောက်ပြပါသည်။
အာဏာရှင် စစ်အစိုးရအတွက် ပြည်သူ့ ထောက်ခံမှုလိုချင်ရင် ခေါင်းစဉ်ရှာ ရန်သူအား ကွန်မြူနစ် ဆိုပြီး တံဆိပ်ကပ်ပေးလိုက်ယုံပါ၊
လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ နိုင်ငံရေး သတ်ချင်ရင် ထောက်လှမ်းရေးတဲ့၊
ဒါတွေက ဖြတ်သန်းမှုအရ ဘ၀ပေး အသိများပေါ့၊
ရန်ငါ စည်းပြတ်နေတဲ့ သူတယောက်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဘယ်တော့မှ ဦးမညွှတ်ခဲ့တဲ့ လူတယောက်၏ စိတ်သဏ္ဍာန်ဟာ ယောက်ဖကို ကြက်ဥကြွေးသလို ရန်သူ အားပေးမလုပ်တာတော့ အမှန်ပဲ။
ဤကား ဆေးကုဖို့ဆေးမရှိတဲ့ အခြေအနေမှာ ဆေးအဖြစ်တောင် သစ္စာဆိုပြီး ကုသလို့ရတဲ့ အမှန်တရားတခုပါ၊
အမှန်အကန် အနစ်နာခံနေတဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ၈၈ ကျောင်းသားအဖွဲ့၊ ကိုဇာဂနာ စသော အနုပညာရှင်များ၊ တောတွင်းရဲဘော်များ (မြို့ပေါ်မပါ၊ မြန်မာပြည်ကို မဆိုလိုပါ)၊ ပြည်တွင်းမှာ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ဆောင်ရွက်နေကြသော သူများကိုတော့ ဝေဖန်ဖို့လဲ အကြောင်းမရှိ၊
စိတ်ထဲမှာ မိဘနှင့် တတန်းတည်း လေးစားနေရတဲ့ သူတွေပါ။
ကိုယ့်မှ မလုပ်နိုင်တာ၊ လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေတာကိုး
သူတို့ကိုပဲ အားပေးအားမြောက်ပြုရမှာပေါ့ ၊ လွင့်မျောခဲ့တဲ့ စာစုများမှာလည်း ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကို သဲတမှုန့်လောက်တောင်မျှ မပြစ်မှားမိခဲ့ပါဘူး။
ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ လူငယ်ဘ၀ကို ၁၀နှစ်လောက် ရိုးမပေါ်က နပန်းသမားကြီး ကိုရွှေငှက်ဖျားနှင့် ထွေးပုတ်သတ်ပြီး မနက်ဖြန်ဆိုတာ မရောရာတဲ့ ကျည်ဆံကြားမှာ စားခြင်း အိပ်ခြင်းအမှုတွေ လုပ်လာတော့ လူဖြစ်ယုံတမည်လေးပါ၊ မြို့ပေါ် ( ပြည်တွင်း မဟုတ် ) မှာ တော်လှန်ရေး လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ တသက်လုံးလဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေး ကာလတလျှောက်မှာ ကြားဖူးခဲ့တဲ့ ခေတ်အစားဆုံး စကားလုံးတွေက
“စစ်အစိုးရကလည်း ပြည်တွင်းစစ်ကို ပိုးမွေးသလို မွေးပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တည်ဆောက်သလို၊ သူပုန်တွေကလဲ သူပုန်ဘ၀ကို ခုံမင်နေတယ်”
“ လောင်းရိပ်မိနေတဲ့ သစ်ပင်ဟာ ဘယ်တော့မှ မကြီးထွားနိုင်ဘူး”
“ မတူတာကို ခွဲလုပ်၊ တူတာတွေကို ပေါင်းလုပ်”
“ သူရဲကြောက်လို့ အဖေါ်ခေါ်အိပ် ဘတ် ၂၀၀၊ ရေငတ်လို့ ရေသန့်ဝယ်သောက် ဘတ် ၁၀၀၊ ဘတ် ၁၀၀ ကျလို့ ကုန်းကောက်လိုက်တာ ဘတ် ၂၀၀ ကျပျောက်”
ဆိုတဲ့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေက ရန်သူ့ ပါးစပ်က ထွက်လာသော ၀ါဒဖြန့်အရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တော်လှန်အမြင်ဖြင့် ဖေါက်ထွက်လာတဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေပါ။
မှန်တချပ်ဟာ အစိတ်စိတ် အမွာမွာကွဲပြီးမှ စူပါဂလူးနဲ့ ပြန်ဆက်၍ ကြည့်လျှင် ကြေးမုံရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ ကြည့်သူတွေရဲ့အဆင်ဟာ မကောင်းတော့ပါဘူး။ သေချာတာတခုက ပုံမှန် မှန်တချပ်လိုတော့ ကြည့်မကောင်း မဟုတ်၊
တောခိုကျောင်းသားတွေ အသက်နှင့်မျှ တွယ်တာလာတဲ့ မိမိ အဖွဲ့အစည်းကို ဘာကြောင့် စွန့်ခွာလာကြသလဲ။
ABSDF ပေါင်းစည်းပြီးမှ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့  ရဲဘော်တွေက မိခင်အဖွဲ့အစည်းကို ရင်နာနာဖြင့် စွန့်လွတ်ခဲ့တာက တော်လှန်ရေးကာလ ခေတ်အစားဆုံး စကားလုံးတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိတာခဲ့တာလေ။
၁၉၉၆/ ၁၉၉၇ နှစ်များ ကာလ အမောင်ကျောင်းတွေ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တိုးဝင် ပြန်နှံလာခဲ့တာ အများဆုံးဖြစ်၏။ အားလုံးဟာ တတိယနိုင်ငံကို မမျှော်မှန်းခဲ့ပါဘူး ထိုင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်သလိုပဲ နေထိုင်တော့မယ်။ ရန်သူဆီကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက်ဘူး စိတ်ဖြင့်ပေါ့။
ပြန်လှည်ပေါင်းစည်းရေး ပြုလုပ်အပြီး ရဲဘော်များသည် မိခင်တပ်ရင်း အသီးသီးမှ စွန့်ခွာလာသည်ကိုက အကွဲအပြဲ မဖြစ်ခင် အသက်များဖြင့် ရင်းနှီးတည်ဆောက်လာသည့် ပြည်သူ့ထောက်ခံမှုများဟာ အကွဲအပြဲဇာတ်လမ်းများမှ မွေးဖွားလာသည့် အကျိုးများကို ဘယ်လိုမှ ပြန်လှည် ရယူနိုင်စွမ်းမရှိအောင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အနေအထားများ ဖြစ်နေသည်ဟု သဘောပေါက် သိမြင်လာခဲ့သည်။
ရှေ့တန်းတနေရာမှာ ရန်သူကို တိုက်ရင်း ပြည်သူ့ အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်လျက် တော်လှန်ရေးတခု ဆင်နွဲခဲ့ပါသည်။
အကွဲအပြဲ ဇာတ်ကြမ်းတွေကြောင့် အဖွဲ့ပေါင်း များစွာ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ပြည်သူ့အကျိုး ကာကွယ်ဖို့ နေသာသာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ရင်းဖြင့် ပြည်သူခမျှ မြေဇာပင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ပြည်သူများလည်း သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ “ နင့်တို့ဟာက အဖွဲ့တွေများလိုက်တာ ဘယ်သူစကားကို နားထောင်ရမှာလဲ၊ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ တဖွဲ့တည်း ရှိနေတဲ့ စစ်အစိုးရ တပ်ကိုပဲ အားကိုး ရမလိုလို ဖြစ်နေပါပြီ” ဆိုသော ပြည်သူ့ ရင်ဖွင့်အသံများက ရင်နာနာဖြင့် ကြားနာခဲ့ရပါသည်။
ပြန်လှည် ပေါင်းစည်းရေး ပြုလုပ်အပြီး သကာလများတွင် မိမိတို့ အခြေခံနယ်မြေများက ရန်သူ့ လက်အောက်သို့ ကျဆင်းခဲ့ရသည်။ ၎င်းအနေအထားများကို ပြန်လှည်တိုက်ယူဖို့အတွက် မလွယ်ကူနိုင်ပေ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပြည်သူ့ ထောက်ခံမှု ကျဆင်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ နောက်ပြီး ရိက္ခာ၊ ထောက်ပံပစ္စည်း အားလုံးက တော်လှန်နေသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
ထိုသည်ပင် သစ်ပင်ကြီးများ အောက်တွင် ရှင်သန်နေကြရသော သစ်ပင်ငယ်တို့၏ သဘောပါပဲ၊
သို့ဖြစ်ပါ၍ အဖွဲ့ဝင်များသည် မိမိ ပြုလုပ်နေသည့် တော်လှန်ရေးအပေါ် ပြန်လှည် စစ်တမ်း ထုတ်လာကြသည်။
အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်မှုဆိုသည်မှာ မျက်ကန်း တစ္ဆေမကြောက် ပုံစံတော့ လုပ်ယူမရပါ။
ရန်သူ သတ်ခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူစွာ မသေရပဲ၊
ပြည်သူသာ အမိအဖဟု ခံယူထားသော တပ်မတော်တခုအတွင်း တိုက်သူများသည် အမိအဖ၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုသော သေကိန်း ရှိဖွယ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တောနတ်ကြီး ဖမ်းစား၍ သေကိန်းများ ကြုံလာနိုင်ဖွယ် ရှိသည်။
သေခြင်း၏ စစ်တမ်းက ဂုဏ်မမြောက်သောအခါ မိခင် အဖွဲ့အစည်းကို အရှုံးတွေ ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး စွန့်ခွာလာခဲ့ရသည်။
တချို့သော ရဲဘော် အတော်များများသည် ထွက်ပေါက်မရှိပဲ ရန်သူ့ဆီသို ဦးညွှတ် ဒူးထောက် ခေါင်းငုံ့ ရပြီး ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လှည် ၀င်ရောက်ခဲ့ရသည်။ ဤသည်မှာလည်း ညီညွတ်မှုမရှိသည့် အကျိုးအဆက်တခု ဖြစ်၏။
ကျွန်နော် ကိုယ်တိုင်လည်း အမဖြစ်သူက “ အမေလည်း သေခါနည်းပြီ မိသားစု စုစုစည်းစည်းဖြင့် နေကြရအောင် ပြန်လာပါတော့ အားလုံး တာဝန်ယူတယ် ” ဘာညာ သဓကာတွေဖြင့် လာခေါ်ခြင်း ခံရသည်။ ကျွန်နော်အနေဖြင့် တခွန်းတည်းသော စကားက “ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်၊ မပြန်တော့ဘူး ” ဟု အဖြေတခုသာ ပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒူးထောက်ခဲ့သည့် တချို့သော ရဲဘော်များသည် အဆင်မပြေမှုများစွာဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ပြန်လှည် ၀င်ရောက်ပြီး တတိယနိုင်ငံများသို့ ထွက်ခွာနိုင်ရန် ကြိုးစားလာသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
တတိယနိုင်ငံများကို ထွက်ဖို့ မျှော်မှန်းခဲ့သည် ထားဦး၊ လမ်းခရီးက စိတ်ကူးလို့ မ၀ံရဲလောက်အောင် မမြင်ရတဲ့ အန္တရယ်တွေက ရင်ဆိုင်ရမယ်လေ။ ဖြတ်ဖူးတဲ့လူတိုင်း သိပါတယ်။ စာအုပ်မရှိ၊ ပိုက်ဆံမရှိ၊ အထာမကြွမ်း၊ သန်းကောင်ထက် ညမနက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးက လွမ်းမိုးပြီး စိတ်ဖြင့် စေစားခဲ့တာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ဖြတ်သန်းခဲ့လာတဲ့ ဆိုးဝါးမှုများကို အမောင်ကျောင်းသားတွေ ကောင်းကောင်း ခံစားခဲ့တယ်။
စစ်ပွဲတရာ နွဲချင်တယ်ဗျ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င်နေရတဲ့ ဒုက္ခက မသေး၊ ဒါတောင် မသမာတဲ့ သူတွေက “ တောင်ကျော်” လို့ ကင်းပွန်းတတ်လိုက်သေးတယ်။ တောင်ကျော်လို့ အမည်ထွင် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သော တချို့များလည်း ယခုအခါ တိုင်းတပါးတွင် အဆာခံ အသက်မွေးမြူနေရသည်။
အဆင်မပြေမှုတွေ ရောထွေးနေတဲ့ အနေအထားမှာ နောင်တော် ကျောင်းသားတွေ ဖေါက်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း အားလုံး ဖြတ်လျှောက်ခဲ့တာလေ။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ရောက်လာမှ လူသတင်း လူချင်းဆောင်သဘောဖြင့် ဒီလမ်းရှိတယ် ဆက်လျှောက်ရမလား၊ ထိုင်းမှ အဆင်မပြေမှုများနဲ့ ရပ်တည်မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကိုယ်ဟာကိုမေး ကိုယ်ဟာကိုယ် စဉ်းစား ကိုယ်ဟာကိုယ် ဆုံးဖြတ်လာတာပါ။ နိုင်ငံခြားထွက်ချင်လို့ တော်လှန်ရေး လာလုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါ။
ဘေးကြပ်နံကြပ် ဖြစ်နေသော စည်းဝိုင်းတခုမှ ခုန်ထွက်လိုက်တဲ့ သဘောတခု ဖြစ်တယ်။
နိုင်ငံခြားကို ရောက်နေလို့ အမှားတခုအဖြစ် သတ်မှတ်ရင်တော့ ခံရမှာပဲလေ။ နိုင်ငံခြားမှာ နေလို့ စိတ်သဏ္ဍာန်က စုတ်ချက်မကောင်းတဲ့ ပန်ချီကားတချပ်လိုတော့ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါဗေမဲ့ ဆားမပါတဲ့ ဟင်းတခွက်လိုတော့ မဟုတ်ပါ။
တော်လှန်အမြင် တော်လှန်အတွေးက ဒီတသက် ဘုရားတောင် ချွတ်လို့ မကျွတ်လောက်ပါဘူး၊
အထက်ပါ ဘာကြောင့် ဋီကာတွေ ဖွင့်နေရတာလဲ၊
“ ရိုးရိုးမြင် မှန်မှန်ပြော၏” ဆိုတဲ့ပို့စ်တွင် “ ကုလသမဂ္ဂတွင် စစ်အစိုးရအား တရားမ၀င် အစိုးရဟု အဆိုတခု တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ သို့ဗေမဲ့ တချို့သော နိုင်ငံရေးကို လုပ်နေသူများက ပါဝင် ထောက်ခံခြင်းမရှိသဖြင့် ပြသာနာများစွာ ကြုံတွေ့ရပြီး ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် မရောက်ပဲ ကိုယ့်အချင်းချင်းပဲ သဘောထား ကွဲလွဲခဲ့ရပါသည်။ ”
ထိုကဲ့သို့ ရေးသားခဲ့ခြင်းသည်လည်း ဥစ္စာပျောက်လို့ ငရဲရောက် နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်မှာလဲ အချက်အလက် မေးရင်တော့
(မေး) ဒေါ်စန်းစန်းအနေနဲ့ တခြားဘာများ ဖြည့်စွက်ပြောစရာရှိပါသေးလဲခင်ဗျ။
(ဖြေ) ဒီကိစ္စတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ စက်တင်ဘာ (၉) ရက်နေ့မှာ တင်မယ်ဆိုတော့ (၈) ရက်နေ့မှာ လက်မှတ် ထိုးတာပါ။ လက်မှတ်မထိုးတဲ့လူတွေက မထိုးဘူးပေါ့နော်။ ကျမလက်မှတ်ထိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကျမကတော့ ဒီကိစ္စကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဆောင်ရွက်တယ်။ အခုပြောစရာဖြစ်နေတာက ကျမလက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အမ်ပီယူထဲမှာလည်း လုပ်ချင်တဲ့လူ မလုပ်ချင်တဲ့လူ၊ အန်စီဂျီယူဘီနဲ့ ကျမတို့နဲ့လည်း ကွဲတယ် ဘာညာဆိုတာတွေက တခါတလေကျတော့ ကျမအပေါ်မှာ ရိုက်ခတ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ကျမကို ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကျေးဇူးတင်တယ် ထောက်ခံတယ် ဆိုတာတွေ ပြောပါတယ်။ ကျမအနေနဲ့ကတော့ ဒါကိုလုပ်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး အမ်ပီယူကနေ ဆောင်ရွက်မှာပါ။
လူတယောက်ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုအပေါ် လက်မှတ် မထိုးခြင်းဆိုသည့် သဘောထားက မထောက်ခံသည်ဟု ထင်စရာပဲလေ။ ထင်သာမြင်သာကို သုံးသပ် ရေးသားပြီး ထောက်ပံ ပြုတာပါ။
တော်လှန်နေသော မည်သည် အမှုကိစ္စမဆို အားပေးစမြဲပါ။ ထောက်ခံစမြဲပါ။
ကြုံတွေလာသည့် အခြေအနေများမှ သတိအဖြင့် ဆင်ခြင်ရရင်ဖြင့် “ နံရံတိုင်းမှာ နားရှိ၊ သစ်ပင်တိုင်းမှာ မျက်စီရှိ” ဆိုသလို ကိုယ့်ဖက်က ဘာလုပ်လုပ် ရန်သူ့ စစ်အစိုးရက ခြေတလှမ်းဦးနေတာ တကယ်ပဲ၊ ဆိုလိုတာက ကိုယ်က ကြံစည် စိုင်းပြင်းနေယုံပဲသေး ရန်သူမှာက ကိုယ့်ကြံစည်နေတာကို အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီးနေပြီလေ။ အားလုံးသော အကြံအစည်ကို မဆိုလိုပါ။
အခုလို ရေးသားသည်ကလည်း ထောက်ပြ ဝေဖန်ရင်မှုကို ပြုလျှင် ထိုသူသည် ရန်သူ ထောက်လှမ်းရေးဟု တံဆိပ်ကပ်ကြ မလား၊
ထိုကဲ့သို့ ဝေဖန်ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြင့် ရန်သူ့ထောက်လှမ်းရေး၊ စစ်အာဏာရှင် အလိုတော်ရိတယောက် မဟုတ်ပါဘူးလို့ သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။
ဝေဖန်ရာတွင်လည်း အကြောင်းအရာ တစ်ခုလုံးအား ခြုံငြုံသုံးသပ်၍ မိမိထင်မြင်သည့် အကျိုးတရားကို ထိန်းညှိသည့်သဘောဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခြင်းဟူသော အခွင့်အရေးအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး ရေးသားနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊
ငါသည် ရပ်တည်မှုတခု အသင့်အတင့် ရှိနေသော နေရာတခုကို ရောက်နေပါသည်။ တော်လှန်ရေး လာမပြောပါနဲ့ ငါ့နှင့်မဆိုင်တော့ဘူး စိတ်ထားရရင်တော့ ကောင်းသား။
ဤသို့ ထောက်ရှု့ ဝေဖန်သည်ကလည်း ဖန်တီးမှု၏ အားနည်းချက် သိုမဟုတ် လိုချင်သည့် အဖြေတခုကို အနည်းဆုံး ဆိုက်ရောက်လိမ့်မည် ဟူသော ဆန္ဒတခုသာ ဖြစ်တယ်လေ။
ခင်မင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကလဲ ကိုယ်ပေါင်ကို ကိုယ် လှန်ပြီးထောင်းရင် သက်သက်ညာညာ လုပ်ပါလို့ အကြံပေးပါတယ်။ တကယ်ပြောတာ နစ်နာစေလိုတဲ့ စိတ်ဖြင့် တွေးခြင်း ရေးခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်ယံ ပါးပါးလေးပဲ။ သည်လို အကွဲအပြဲများကို ကြုံဖူးသမျှ ပြောလိုက်ရရင် စစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရေးတဲ့ တော်စတွိုင်းတောင် ထိုင် ငို သွားမှာ၊ ရှည်လွန်းလို့။
အင်း… ဘယ်သူက ထွင်လိုက်သနည်း၊
၎င်း စကားလုံးကိုက စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို အရောင်မှိန် သွားပါတယ် ဟု ထင်မြင်မိ၏။ မည်သည့်အဖွဲ့မဆို တပေါင်းတစည်းတည်း ရှိနေသင့်သည့် အနေအထားလေ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွင်း ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ရှိသော ညီညီညွှတ်ညွှတ်အဖွဲ့ဆို စစ်တပ်ပဲ ရှိတယ်။ စစ်တပ်က ဒါကို အခွင့်အကောင်းယူပြီးတော့ နိုင်ငံကို လိုသလို ပုံစံချ ဖိနှိပ်၊ ကြိုက်သလို ချယ်လှယ်နေတယ်လေ။
စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ကရင်က တမျိုး၊ ရှမ်းက တဖုံ ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုလျှင် လွတ်လပ်ရေးဟာ ဘယ်တော့မှ ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သမိုင်းဝင် စကားတခွန်းက သက်သေပြနေတယ်လေ။
သြော် ကြုံလို့ .. တူတာ ပေါင်းလုပ်မယ် ဆိုတာက ကျွန်နော်တို့အတွေ့အကြုံပေါ့
ABSDF ကွဲပြီး ဘက်မလိုက်၊ ကိုနိုင်အောင်၊ ကိုမိုးသီးဇွန် စတဲ့ အဖွဲ့တွေ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ကွဲခဲ့တယ်။ လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်း မလုပ်တော့ပါဘူး။ တခုတော့ရှိတယ် အရက်သောက်တဲ့အခါများဆိုရင် ကြုံရင် ကြုံသလို ပူးပေါင်းပြီး သောက်ကြတယ်။ ဒါတခုပဲ စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိတာလေ။
ဖြတ်သန်းမှုအရ ဦးနှောက်ထဲမှာ စွဲမြဲစွာဖြင့် ညီညွတ်ရေး စည်းလုံးရေးဆိုတာကြီးက စိတ္တဇလို စိုးမိုးနေပါတယ်။ ရေကူးသင်စ ရေနစ်ဖူးခဲ့တဲ့ လူတယောက်လို ရေနစ်တာကို ကြောက်လှန့်နေတဲ့သူပါ။ နောက်လာမဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ခေါက်ရိုးကြိုးနေတဲ့ ဇတ်မျောကြီးတခုမှာ ဆက်ပြီး မကစေချင်တဲ့ သဘောပါ။ ဒါကိုက ဆိုးမွေ ဖြစ်နေတယ်လေ။ ၎င်းဆိုးမွေကြီးထဲမှာ သားကောင်အဖြစ် နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေကို မမြင်စေချင်ပါဘူး။ အထိအတွေ့လည်း မပေးချင်၊ မခံစားစေချင်ပါဘူး။
ကိုယ်တို့ ခံစားလာခဲ့ပြီးပြီလေ။ တခါသေဖူးခဲ့တော့ ပျဉ်ဖိုးနားလည်ခဲ့လို့၊ နောက်ထပ် ပျဉ် ဈေးမတက်အောင် ကာကွယ် ရေးသားနေတာလေ။ အရှုံးဆိုတာ ပေးဆပ်လိုက်တာက အများကြီးဗျ၊
အကွဲအပြဲ ဇာတ်လမ်းကို အကယ်ဒမီပေးရမလား၊
မညီညွှတ်သော ဇာတ်မျောကို အရောင်တင့်သွားအောင် ရွှေချပေးရမှာလား၊
စစ်အစိုးရ မကောင်းကြောင်းပြောပြီး ကိုယ့်ဖက်သား ကောင်းကြောင်းပြောမှ တော်လှန်ရေး လုပ်တာလား၊
ဒါဗေမဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချီရေးအရတော့ ကိုယ့်ဖက်သားတွေ အားတက်စေသော စာပေ အတွေးအမြင်များကို ဆန့်ကျင်ရေးသားနေခြင်း မဟုတ်ပါ၊
ဒါကြီးတွေရှိနေလို့ ရည်မှန်းချက်များ မှုန်ဝါးနေတယ် ဆိုပြီး ထောက်ပြတာပါ၊
တိုက်ရင်း စည်းလုံးမှသာ ကောင်းပါတယ်။ တိုက်၍ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ပြီးမှ စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို လုပ်မယ်ဆိုသည်လည်း မဖြစ်နိုင်၊ အက်ကြောင်းတွေများ ရှိနေသာလျှင်ပင် ဆုံးရှုံးမှုတခု တဖန်ပြန်တွေ့ရမည်။
ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်တန်းဖတ်စာမှာ “ နွံထဲ၌ လှည်းဘီး ကျွံနေသည် ကူ၍ တွန်းပေးကြပါ” လို့မှတ်သားဖူးတယ်လေ၊ ကဲ ဘယ်လို တွန်းရမလဲ..
သက္ကရာဇ် ၁၁၄၃ ခုနှစ်၊ ဘိုးတော်မင်းလက်ထက်မှာ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ပုခန်းမင်းသား၏
“ တောင်ချောင်မှာ မောင်အိပ်လို့၊ တောထိပ်မှာ ကွေး။
တောင်မြင့် ဂန္ဒာမာက၊ ကြာတိုင်းမွေး။
ရေကန်သာ ကြာတိုင်းအေး၊ ရွှေပြည်တော် မျှော်လေတိုင်းဝေး ..”
ဆိုတဲ့ ပတ်ပျိုးထဲက ကဗျာတပုဒ်ကို ကူးချ ခံစားလိုက်ပါ၏။
Posted by လူလ at Monday, December 08, 20083comments:
Merry Christmas andaHappy New Year ကို နိုင်ငံတ...